News under अर्थ
असार १७ देखि कतारको मुद्रा नचल्ने,यथाशीघ्र सटही गर्न नेपालीहरुलाई राष्ट्र बैंकको आग्रह
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 21st April 2021
काठमाडौं । हाल चलनचल्तीमा रहेको चौथो संस्करणको कतारको मुद्रा नचल्ने भएको छ । कतार सरकारले जुलाई १ तारिख अर्थात् असार १७ गतेदेखि चौथो संस्करणका बैंक नोटहरु चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । त्यसैले कतारी रियाल यथाशीघ्र सटही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालीहरुलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्ता नोट भए आगामी...
होटल तथा रेष्टुराँ राति ८ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 20th April 2021
काठमाडौं &ndash; सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै होटल तथा रेष्टुराँ सञ्चालनका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अब होटल तथा रेष्टुराँ बिहान ८ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले उक्त समयपछि होम डेलिभरी सेवा...
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य,पेट्रोल प्रतिलिटर १२१
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th April 2021
काठमाडौं &ndash; पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाइएको छ। नेपाल आयल निगमले शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेल&divide;मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो। यसअघि गत चैत २२ गते मात्र मूल्य बढाइएको थियो। निगमका अनुसार अब काठमाडौंका लागि नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोलको १२१ र डिजेलमट्टितेलको १०४ रुपैयाँ निर्धारण...
फेरि बढ्यो सुनको भाउ,तोलाको ९० हजार बढी
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 16th April 2021
काठमाडौं । सुन&ndash;चाँदीको भाउमा वृद्धि आएको छ । शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ७०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबारका लागि छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९० हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरेको छ । बिहीबार तोलाको ८९ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजाबी सुनको भाउ पनि बढेर तोलाको...
रुरु जलविद्युतको आइपीओ बाँडफाँट,कतिले पाए ?
काठमाडौं । रुरु जलविद्युत् परियोजनाको आइपीओ बाँडफाँट भएको छ । शुक्रबार विहान साढे ८ बजे सेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलले नागपोखरीमा रहेको कार्यालयना बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीको आइपीओमा १६ लाख ६९ हजार ५६६ जना आवेदकले २ करोड ३३ लाख ७७ हजार २२० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए ।...
एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 15th April 2021
काठमाडौँ &mdash; कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने बताएका छन् । बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निर्देशन आएको बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले भने, एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देश...
लहानमा मध्यराति गोली प्रहारबाट एक व्यवसायीको हत्या
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th April 2021
सिरहा &ndash; सिरहाको लहानमा गएराति एक व्यवसायीको हत्या भएको छ। लहान नगरपालिका&ndash;१९ मा सुनचाँदी पसल गर्ने ४० वर्षीय प्रदीपकुमार विश्वकर्माको हत्या भएको हो। घरमै सुतिरहेको बेला मध्यराति हतियारधारी समूहले गोली हानेर विश्वकर्माको हत्या गरेका इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख डीएसपी तपन दहालले जानकारी दिए। डकैती गर्न आएका आएको हतियारधारी समूहले गोली प्रहार...
आइपीओ भर्न मेरो सेयर नखुलेर समस्या भयो ? समाधानका लागि यसो गर्नुहोस्
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 09th April 2021
काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीका आइपीओ खुल्ने क्रम जारी छ । तर मेरो सेयरमा बेलाबेला आउने समस्याले लगानीकर्ताले सहज ढंगले आइपीओ भर्न पाएका छैनन् । त्यसैगरी इडिआइएस गर्नेले पनि वेवसाइट नखुल्दा समस्या भोगिरहेका छन् । सीडीएसएसीका सीइओ पूर्णप्रसाद आयार्चका अनुसार यो समस्या समाधानका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार...
सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ आज बाँडफाँड हुने
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रोपावरको आईपीओ आज बाँडफाँड हुने भएको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलका अनुसार बिहान ११ आईपीओ बाँडफाँड हुने भएको छ । कम्पनीले चैत ६ गतेदेखि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरमा २९ लाख कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । त्यसमध्ये ५ प्रतिशत (१ लाख ५४...
संसारकै धेरै अर्बपति बस्ने सहर बन्यो बेइजिङ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 08th April 2021
बेइजिङ &ndash; चिनियाँ राजधानी बेइजिङ संसारकै बढी अर्बपतिहरू बस्ने सहर बनेको छ। फोर्ब्स म्यागजिनले प्रकाशित गरेको संसारका अर्बपतिको सूचीमा परेकामध्ये १ सय जनाल बेइजिङका बासिन्दा छन्। तीमध्ये ३३ जना अर्बपति यसपालिमात्रै थपिएका हुन्। बेइजिङपछि अमेरिकाको न्युयोर्क सहर छ। त्यहाँ ९९ जना अर्बपति बस्छन्। सात वर्षयता न्युयोर्क नै धेरै अर्बपति भएको सहरमा...
भक्तपुरको पलाँसेमा काठमाडौं फन भ्यालीको भव्य उद्घाटन हुँदै,चर्चित गायक/गायिकाको प्रस्तुती रहने
काठमाडौं &ndash; सूर्यविनायक नगरपालिका&ndash;१० पलाँसेमा काठमाडौँ फन भ्यालीको उद्घाटन हुने भएको छ । व्यवसायी सुजन थापाद्धारा संचालनमा आउन लागेको फन भ्यालीको आउँदो शनिवार (चैत्र २८) भव्य कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको छ । फन भ्याली भित्र विशेष आर्कषका रुपमा कर्णाली म्यूजियम समेत रहेको छ । जहाँ कर्णाली क्षेत्रका भेषभुषा,रहन&ndash;सहन र सांस्कृतिक...
कलंकीस्थित हेयर कलर कम्पनीमा प्रहरी र वाणिज्य विभागको छापा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 06th April 2021
काठमाडौं - कलंकीमा रहेको हेयर कलर कम्पनीमा प्रहरी र वाणिज्य विभागले छापा मारेको छ। मेहन्दी हबिब, काला&ndash;कोला, हिनाजलगायत उत्पादन कम्पनीमा वाणिज्य विभाग र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मंगलबार छापा मारेको हो। ट्रेड मार्क खारेज भइसकेको कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा मेहन्दीलगायत कस्मेटिक सामग्री उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरी बजार पठाइरहेको सूचनाका आधारमा छापा मारेर गोदामहरूमा...
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। आइतबार स्थिर रहेको सुनको भाउ सोमबार २ सयले घटेको थियो। सोमबारको तुलनामा मंगलबार छापावाल सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा ८७ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार बढेर तोलामा ८७ हजार ५०० रुपैयाँमा...
न्यूरोडमा दिउँसै आइएमई पसेर ६ लाख लुटपाट
काठमाडौं &ndash; राजधानीमा बुधबार दिउँसै आइएमईमा प्रवेश गरेर लुटेराहरूले ६ लाख रुपैयाँ लुटपाट गरेका छन्। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील मानिने काठमाडौं&ndash; २२ खिचापोखरीस्थित आइएमईमा पसेर लुटपाट भएको हो। बुधबार ३ः५६ बजे राज भण्डारीले सञ्चालन गरेको ग्लोबल जिपाङ टुर्स एन्ड ट्राभल्स आइएमईमा अपरिचित व्यक्तिहरू प्रवेश गरेका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार उनीहरूले कर्मचारी...
आज सुनको भाउ ९०० ले बढ्यो
काठमाडौं । सुन&ndash;चाँदीको भाउ फेरि बढेको छ । बुधबारको तुलनामा आज तोलामा ९०० रुपैयाँले सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि छापावाल सुनको भाउ तोलाको ८६ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरेको छ । बुधबार तोलाको ८५ हजार ६०० मा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजाबी सुनको भाउ पनि...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 31st March 2021
काठमाडौं &ndash; चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले ताजा प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले &lsquo;साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसः साउथ एसिया भ्याक्सिनेट्स&rsquo; रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रक्षेपण गरेको हो। त्यस्तै अर्को वर्ष ३.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि उसले गरेको छ। खासगरी कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदा सन् २०२३...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th March 2021
बाग्लुङ - पश्चिम नेपालको समृद्धिका लागि कालीगण्डकी नदी थुनेर विद्युत् निकाल्नका लागि यहाँका स्थानीय तहको पहलमा अध्ययन थालिएको छ । बागलुङ, पर्वत र गुल्मी जिल्लाबाट बग्ने कलीगण्डकी नदी थुनेर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले प्रारम्भिक अध्ययनपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न थालिएको हो । विद्युत् विकास विभागले अध्ययनका लागि ग्लोबल...
८ महिनाको अवधिमा नेपालमा २६ अर्बको मोबाइल आयात
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 22nd March 2021
काठमाडौं &ndash; चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालमा २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको छ। साउनदेखि फागुनसम्म ४९ लाख ९३ हजार सेट मोबाइल फोन भित्रिएको हो। जबक, गत वर्षको यही अवधिमा १४ अर्ब ३७ करोडको मात्रै मोबाइल भित्रिएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार यसवर्ष चीनबाट सबैभन्दा बढी १६ अर्ब र भारतबाट ८...
नेपाल चिया विकास निगमले आइपिओ जारी गर्ने
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 21st March 2021
काठमाडौँ । नेपाल चिया विकास निगमले शेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने भएको हो । आगामी हुने कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा शेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पेश हुने कम्पनीले जनाएको छ । चैत ६ गते बसेको कम्पनीको १५४ बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको १९औं वार्षिक...
पाँच सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 19th March 2021
काठमाडौँ&ndash; आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । हिजो तोलामा तीन सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज भने पाँच सय रुपैयाँले घटेको हो । आज तोलामा सुनको ८६ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजो सुनको भाउ तोलामा ८७ हजार दुई सय रुपैयाँ थियो । आज चाँदीको भाउ पनि घटेको...
सिंगटी हाइड्रोको आइपिओ खुला
काठमाडौं &ndash; सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) बिक्री खुल्ला भएको छ। कम्पनीले कर्मचारी तथा सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएपछि बाँकी कुल २६ लाख ९७ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नका लागि आवेदन खोलेको छ। इच्छुक आवेदकले कम्तीमा १० र बढीमा २ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। अंकित मूल्य १ सयमा...
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य,पेट्रोल प्रतिलिटर ११८ पुग्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 17th March 2021
काठमाडौं &ndash; नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पेट्रोल तथा डिजेल&divide;मटितेलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११८ र डिजेलको १०१ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई ईन्धन (आन्तरिक उडानतर्फ)को साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले वृद्धि गरेर ७४...
उद्योगपति अम्बानीको घरबाहिर विस्फोटक पदार्थ प्रकरणमा अर्को ठूलो खुलासा
काठमाडौं &ndash; भारतमा उद्योगपति मुकेश अम्बानीको घरबाहिर विस्फोटक पदार्थ राखिएको प्रकरणमा मुम्बईका तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक सचिव वाजे पक्राउ परेयता दिनदिनै नयाँ&ndash;नयाँ रहस्य खुलासा भइरहेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यस क्रममा आज अर्को ठूलो खुलासा भएको छ। अम्बानीको घरअगाडि विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन र मारिदिने धम्कीको पत्रसहित फेला परेको स्कार्पियो गाडी घटनाको अघिल्लो...
स्रोत नखुलेको साढे १९ लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिक वीरगंजबाट पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 14th March 2021
पर्सा &ndash; वीरगञ्ज भन्सार एरीयाबाट सशस्त्र प्रहरीले चेकजाँच गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको साढे १९ लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। शनिबार बिहान ९ बजेको समयमा भारत रक्सौल तर्फबाट नेपाल वीरगञ्ज आउँने क्रममा एक जनाले मोटो ज्याकेट लगाएर साइकल चलाउँदै आएकोमा सशस्त्र प्रहरीले संखाको अधारमा खानतलासी गर्दा स्रोत नखुलेको १९...
सुन तोलामा ६ सयले बढ्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 10th March 2021
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार ६ सय रुपैयाँले नै घटेको सुनको भाउ बुधबार पुनः बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले आजका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ८६ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ । तेजावी सुनको कारोबार मूल्य ८५ हजार ७५०...
ठेकेदार मनोज भेटवालसहित ११० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर,३८ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबी
काठमाडौं &ndash; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार मनोज भेटवालसहित ११० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भेटवालसहित साविक मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक छविरमण अधिकारी, बसन्त मल्ल, विकास श्रेष्ठ, मधुवनलाल श्रेष्ठ, भैरवप्रसाद भेटवाल र रविन लामा लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए । विभिन्न...
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र नियुक्त
काठमाडौं &ndash; नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा बमबहादुर मिश्र र निलम ढुंगानालाई नियुक्त गरिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिश्र र ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट मन्त्रिपरिषदले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको हो। गभर्नर अधिकारीले २ पदका...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th March 2021
काठमाडौं &ndash; स्थानीय बजारमा आज पहेंलो धातुको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ । अघिल्लो साता लगातार ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज साताको पहिलो दिन नै तोलमा ५ सयले वृद्धि भएको छ । मूल्य उकालो लाग्ने क्रममा आज छापावाला सुन तोलामा ८६ हजार १ सय मूल्य निर्धारण भएको छ । छापावाला सुन...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 05th March 2021
काठमाडौं आजदेखि ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) खुलेको छ। कम्पनीले आइतबारदेखि आइपिओमा आवेदन खोल्ने भने पनि सिडिएस एण्ड क्लियरिङको आग्रहपछि आजदेखि नै बिक्री खुल्ला गरिएको छ। कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। अंकित मूल्य १...
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य,कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ तोलामा ९ सय रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार ८६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावल सुनको भाउ शुक्रबारकालागि ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै तेजावी सुनको भाउ ८५ हजार १५० रुपैयाँमा आईपुगेको छ । चाँदीको भाउ पनि तोलामा ३५ रुपैयाँले घटेको महासंघले जनाएको...
माघ २९ देखि बन्द रसुवागढी नाका आजबाट सञ्चालनमा
काठमाडौं &ndash; ल्होसारका कारण बन्द नेपाल&ndash;चीन व्यापारीक नाका रसुवागढी आजबाट सञ्चालनमा आएको छ । माघ २९ गतेदेखि बन्द नाका आजबाट खुलेको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख राम प्रसाद रेग्मीले बताए । नेपाली व्यावसायीको सामान बोकेका ७ वटा कन्टेनर केरुङबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको भन्सार प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए । नाका खुल्ने सम्बन्धी जानकारी...
द बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची चिकेनको शाखा अब भक्तपुरको जगातीमा पनि,उद्घाटन पूर्वमन्त्री बस्नेतले गर्दै
काठमाडौं &ndash; द बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची चिकेनको शाखा अब भक्तपुरको जगातीमा पनि संचालनमा आउँने भएको छ । काठमाडौंमा प्रख्यात रहेको द बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची चिकेनले आफ्नो शाखा भक्तपुरको जगातीमा पनि विस्तार गर्न लागेको हो । व्यवसायी मनोज केसीले संचालन गर्न लागेको उक्त बर्गर हाउसको उद्घाटन पूर्वमन्त्री एव्म नेकपा ओली...
आव ०७६/०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 04th March 2021
काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक (ऋणात्मक) भएको छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार गत आवमा वाषिर्क आर्थिक वृद्धिदर &ndash;१.९९ प्रतिशत कायम भएको हो । विभागले आधार वर्ष २०१०/११ लाई मान्दै गरेको विश्लेषणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको हो । सो वर्ष प्रतिव्यक्ति आय ११३४ अमेरिकी...
सुन तोलामा एक हजार रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं - सुनको भाउ तोलामा एक हजार रुपैयाँले घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको सुनको भाउको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्दा मूल्य ओरोलो लागेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बुधबार तोलामा ८७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ बिहीबार घटेर ८६ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम...
रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : कृषिमन्त्री अर्याल
काठमाडौं - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रालयले अहिलेदेखि आगामी असार, साउन र भदौसम्मका लागि किसानले मल पाउने अवस्था बनेको दाबी गरेको हो । यो वर्ष एक लाख ८७ हजार मेट्रिकटन वितरण भइसकेको, एक लाख ६२ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात...
काठ तस्करीमा मुछिएका मन्त्री आलेले एक अर्ब घुस अफर गर्नेलाई किन दिए माफी ?
काठमाडौं - वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन देखाइएको बताएका छन् । मन्त्री आलेले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आठौं राष्ट्रिय परिषद्मा मंगलबार व्यक्त गरेको यो धारणाले उनी पनि सन्देहको घेरामा परेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले एक&ndash;एक अर्ब...
पर्सा प्रहरीद्वारा ३ लाख १२ हजार रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 02nd March 2021
पर्सा &ndash; पर्सा प्रहरीले ३ लाख १२ हजार रुपैयाँसहित एक हुन्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १६ रजतजयन्ची चोकमा चेकजाँचको गर्ने क्रममा भारतको रक्सौलबाट नेपालतर्फ बिआर २२ ए आर ३६८ नम्बरको सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका घर पुर्वी चम्पारण मोतिहारी थाना सुगौलीमा बस्ने २५ वर्षिय सोनु साहलाई...
सुन तोलामा १७ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ तोलामा एक हजार ७ सय रुपैयाँले घटेको छ । सोमबार ८८ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको छापावल सुनको भाउ मंगलबारकालागि ८७ हजार रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुनको भाउ घटबढमा अन्तरािष्ट्रय बजार मूल्य नै प्रमुख कारण भएको महासंघले जनाएको छ...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 01st March 2021
काठमाडौं &ndash; टाटा मोटर्सको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको निर्देशक सौर्य शमशेर राणाको मृत्यु भएको छ। नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका राणाको आइतबार बिहान निधन भएको हो। चार दिनअघि काठमाडौंको मेडिसिटी हस्पिटलमा मुटुको अप्रेसन गरेका राणाको बिहान निधन भएको सिप्रदी ट्रेडिङले जानकारी गराएको छ। सिप्रदीका मार्केटिङ म्यानेजर रुपम...
काठमाडौं - काठमाडौंको कुलेश्वरबाट अवैध रूपमा हुण्डीको कारोबारमा संलग्न तीनजनालाई १८ लाख ७८ हजार रुपैयाँसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कुलेश्वर फलफूल बजारमा हुण्डी कारोबार भइरहेको बिशेष सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हुण्डीको कारोबार गरीरहेको अवस्थामा उनीहरुसंग १८ लाख ७८ हजार रुपैयाँसहित तीनैजना लाई आइतबार नियन्त्रणमा लिएको...
आइपिओको नतिजा हेर्न नयाँ वेबसाइट
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 28th February 2021
काठमाडौं &ndash; सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले आइपिओको नतिजा हेर्नका लागि नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। सम्वद्ध कम्पनीको वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइट र सिडिएसको वेबसाइटबाट आइपिओको नतिजा हेर्दा चाप धान्न नसकेपछि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नयाँ वेबसाइट ल्याएको हो। शनिबार सिडिएसले सूचना जारी गर्दै अब आइपिओको नतिजा iporesult.cdsc.com.np बाट हेर्न सकिने जनाएको छ...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 26th February 2021
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका&ndash;१ साङ्लामा फेरि बर्ड फ्लू भेटिएको छ । बर्डफ्लु भेटिएको स्थान र त्यस वरपरका कुखुरा, चल्ला र अण्डा र दाना नष्ट गरिएको पशुसेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले बताए । संक्रमण विहीबार पुष्टि भएको र त्यस क्षेत्रका हजारौं कुखुरा नष्ट गरिएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार...
स्रोत नखुलेको २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसहित बाराबाट दुई भारतिय नागरिक पक्राउ
बारा &ndash; जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट खटिएको प्रहरीले दुई जना भारतिय नागरिकलाई २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ । भारत राज्य बिहार पूर्वी चम्पारण ग्राम पञ्चायत नरकटिया&ndash; ७ टोल नरकटिया बस्ने ३५ वर्षीय चन्द्र शेखर प्रसाद र ३८ वर्षीय सञ्जय कुमारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । कलैयाको मटिअर्वा...
दुई क्यामरा भएको लाभाको सस्तो फोन, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं &ndash; नेपालमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा बिक्री हुने मोबाइल मध्ये &lsquo;लाभा&rsquo; पनि एक हो। लाभा इन्टरनेसनलले लाभाका फोनलाई नेपाली बजारमा ल्याउँदै आएको छ। विगत दस वर्षदेखि नेपाली बजारमा लाभाका विभिन्न फोनहरू बिक्री भइरहेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा लाभा ब्रान्डको हिस्सा सबैभन्दा धेरै, १५ प्रतिशत छ। विशेषगरी &rsquo;बारकिप्याड&rsquo; फोनमा लोकप्रिय लाभाले...
सुन तोलामा तीन सयले घट्यो
काठमाडौं &ndash; बुधबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा तीन सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ८९ हजार ८०० सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी तेजावी सुन प्रतितोला ८९ हजार ३५० रुपैयाँ रहेको छ । आज चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ ।...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 22nd February 2021
वीरगञ्ज &ndash; बाराको जीतपुर&ndash;सिमरा उपमहानगरपालिका&ndash;९ स्थित आरती वनस्पति उद्योगमा आगलागी भएको छ । आइतबार साँझ ७ः३५ बजेबाट लागेको आगो सोमबार बिहान ११ बजेतिर मात्रै नियन्त्रणमा आएको छ । आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ज्वलनशील पदार्थ हुने उद्योगमा भएको आगलागी...
ग्रीनलाइफ हाइड्रोको आईपिओ बाँडफाँड, तपाईको हातमा कति?
काठमाडौं &ndash; ग्रीनलाइफ हाइड्रोले निष्काशन गरेको आईपिओ बाँडफाँड गरेको छ । शुक्रबार बिहान ९ बजे बिक्रि प्रबन्धक बिओके क्यापिटलले आफ्नै कार्यालयमा शेयर बाँडफाँड गरेको हो। ग्रिनलाइफको आईपिओमा माग भन्दा ६.९८ गुणा बढीको आवेदन परेकोले गोलाप्रथाबाट शेयर बाँडफाँड गरिएको छ । आईपिओमा कुल १३ लाख २२ हजार ९ सय ७१ जनाले आवेदन दिएकोमा...
काठमाडौं &ndash; नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । बुधवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ८९ हजार ८ सय रहेको थियो । भने भने आज तोलामा ६ सयले सुनको मूल्य गिरावट आइ ८९ हजार २ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ८८...
इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा देशभरका क्याम्पस अगाडि अनेरास्ववियूको प्रदर्शन,दिउँसो आयल निगम घेर्दै
काठमाडौं &ndash; सरकारले एक सातामा दुई पटकसम्म इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा प्रचण्ड&ndash;माधब समूहको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले आज देशभरका क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौंको रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि कालोपट्टी बाँधेर र टायर बालेर अनेरास्ववियूले प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनकारीले सडकमा बालेको टायर प्रहरीले हटाएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत...
सुनको भाउ एकैदिन ११ सयले घट्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 17th February 2021
काठमाडौं - सुनको भाउ पछिल्लो आठ महिनायताकै सस्तो भएको छ । एकैदिन तोलामा एक हजार एक सय रुपैयाँले भाउ घटेपछि सुनको भाउले ९० हजारभन्दा तल्लो अंक छोएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसअघि सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोलामा १ लाख ३ हजार ५ सयसम्म पुगेको थियो । असार...
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा नेकपाको जित
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 14th February 2021
काठमाडौं &ndash; विभाजित नेकपाका दुवै पक्षलाई दाङका नेकपा निकट उद्योगी व्यवसायीले प्रष्ट सन्देश दिएका छन्, &lsquo;मिलेर गयौ भने मात्र चुनाव जित्छौ ।&rsquo;केन्द्र देखि गाउँ तहसम्म पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा दाङको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा भने दुवै पक्ष मिलेर लड्दा चुनाव जितेका छन् । तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघमा पहिलो पटक नेकपा सम्बद्ध...
पल्सर १५० को मूल्य घट्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 12th February 2021
काठमाडौँ&ndash; बजाज मोटरसाइकलको सबै भेरियन्टको मूल्य बढ्दा यस पटक एउटा भेरियन्टको मूल्य घटेको छ । बजाजको आधिकारीक विक्रेता हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले बिक्री गर्दै आएको पल्सर १५० को मूल्य घटाएको छ । नेपालमा बिक्री हुने १५० सीसी सेग्मेन्टमा बजाज पल्सर १५० को हिस्सा करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । यस्तोमा...
तेलको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए कठोर निर्णय गर्ने यातायात व्यवसायीको चेतावनी
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th February 2021
काठमाडौं &ndash; यातायात व्यवसायीहरुले पटक&ndash;पटक तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि एकमुष्ट रुपमा फिर्ता लिन माग गरेको छन् । सार्वजनिक सवारी चलाएर नाफा निकाल्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले व्यवसायी र उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी भएका मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेर सार्वजनिक सवारीका लागि विशेष सहुलियत घोषणा गर्न माग गरेका छन् । सरकारले त्यसो गर्न...
खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं &ndash; सरकारले खाना पकाउने ग्यास र पट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टतिलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य ११२ र डिजेल&ndash;मटितेलको ९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।...
सुनको भाउ प्रतितोला १५ सयले बढ्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 09th February 2021
काठमाडौं &ndash; नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला १ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा सुन तथा चाँदीको भाउमा बृद्धि भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबारका लागि महासंघले छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ९१ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । सोमबार उक्त सुनको...
सुनको भाउ तोलामा ६ सयले बढ्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th February 2021
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला भाउ ९० हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको हो । शुक्रबार छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । महासंघले आजको लागि तेजावी सुनको भाउ प्रतितोला ९०...
सुन तोलामा ९ सयले घट्यो
काठमाडौं - सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँले सस्तो भएको छ । अघिल्लो दिन ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज ९१ हजार रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले आजकालागि तेजावी सुनको प्रतितेला मूल्य ९० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै चाँदीको...
२ कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुँदै
काठमाडौं &ndash; माघ महिनामा नै दुई कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन हुने भएको छ । एउटा जलविद्युत् कम्पनी र अर्को एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ माघ महिनामा नै निष्कासन हुने भएको हो । आगामी शुक्रबारदेखि नै ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्दैछ भने २८ माघदेखि महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले...
सुन प्रतितोला ५ सयले बढ्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 01st February 2021
काठमाडौं &ndash; नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्यमा वृद्धि भएको छ । सोमबार सुनको मुल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले बृद्धि भएको हो । आज छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार ६०० रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार सुनको मुल्य सामान्य बृद्धि भई...
महिला लघुवित्तको आईपीओ २८ गतेदेखि निष्काशन हुने
काठमाडौं &ndash; महिला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडले माघ २८ गतेदेखि सर्बसाधारणको लागि साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्रि खुला गर्ने भएको छ । संस्थाले सोमबार आह्वान पत्र जारी गर्दै २८ गतेदेखि आईपीओ जारी गर्ने जानकारी दिएको हो । कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४ लाख कित्ता सेयर विक्री गर्न लागेको हो ।...
सुनको भाउ बढ्यो,आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 31st January 2021
काठमाडौं &ndash; नेपाली बजारमा साताको पहिलो दिन अर्थात आज आइतबार सुनचाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा उकालो लागेको छ । शुक्रबार तोलामा ९२ हजार कायम भएको सुनको मूल्य आज तोलामा १ सय रुपैंयाले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले दिएको जानकारी अनुसार आज छापावाल सुन तोलाको ९२ हजार १ सय र...
३ महिनामा एप्पलको व्यापार १ खर्ब ११ अर्ब डलर
काठमाडौं &ndash; आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले यस पटकको क्रिसमसका बेला व्यापारमा रेकर्ड कायम गरेको छ । महामारीका बाबजुत एप्पलका पछिल्ला फोन तथा ल्यापटप लगायतका ग्याजेटप्रति उपभोक्ताहरुको अत्यधिक आकर्षणका कारण एप्पलले सन् २०२० को पछिल्लो त्रैमासिकमा १ खर्ब ११ अर्ब डलरको कारोबार गर्न सफल भएको छ । एप्पलले गरेको यो व्यापारको अंक अघिल्लो...
काठमाडौंको तारकेश्वमा टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लु भेटियो : २३ सय पन्छी नष्ट गरियो
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंमा पालिएका पन्छीमा बर्ड फ्लुको संक्रमण भेटिएको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. ७ साङ्लेखोला, फुटुङका स्थानीय कृषकहरूले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लु भेटिएको हो । त्यहाँ टर्की र कुखुरा मरेपछि ल्याइएको नमूना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर बिधिबाट परीक्षण गर्दा शुक्रबार बर्ड फ्लु रोग...
कुलेश्वर फलफुल बजारमा डिजिटल कारोबारको शुभारम्भ: गभर्नरले भने- 'धेरै नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपरोस्'
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th January 2021
काठमाडौं &ndash; नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूले हस्ताक्षर गरेको नोट धेरै छाप्नु नपरोस भन्ने आफूले चाहेको बताएका छन् । शुक्रबार कुलेश्वर फलफुल बजारमा डिजिटल कारोबारको शुभारम्भ गर्दै उनले सकेसम्म नोटहरु बजारमा नदेखिउन भन्ने आफूले चाहेको बताए । डिजिटल कारोबारले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरोस भन्ने आफूले चाहेको उनको भनाई छ...
जब यातायात कार्यालयको सोफामा भेटियो २ लाख २३ हजार रुपैयाँ
जनकपुरधाम &ndash; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जनकपुरधामस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सोफामा लुकाएको २ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ फेला पारेको छ । लाइसेन्स वितरणमा घुस लेनदेन भएको सूचना पाएपछि आएको अख्तियारको टोलीले मंगलबार झण्डै ६ घण्टासम्म कार्यालय छापा मारेको थियो । कार्यालयमा केही कर्मचारी र एक जना बिचौलिया पनि फेला परे ।...
६ महिनामा सानिमा बैंकले आर्जन ग¥यो १ अर्बबढी खुद नाफा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 27th January 2021
काठमाडौं &ndash; कान्छो वाणिज्य बैंक सानिमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब रुपैयाँ बढी खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक बैंकको अपस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले १ अर्ब ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.३८...
इन्फ्रास्ट्रक्चरको आईपीओमा हातखाली जाने छैन,कति पर्ला तपाईलाई ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 20th January 2021
काठमाडौं &ndash; नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गरेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा आवेदकको हातखाली जाने छैन । तर, आवेदकले रितपूर्वक आवेदन भने गरेको हुनुपर्छ । सिडिएससीका अनुसार आईपीओ निष्काशन गरेको अन्तिम समयसम्म माग भन्दा २.३९ गुणा बढी आवेदन दिएका छन् । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि ७ करोड ५८ लाख...
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओमा १५ लाख २९ हजार ४६० जना आवेदक
काठमाडौं &ndash; नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको साधारण सेयर (आईपीओ)मा माग भन्दा २.३९ गुणा बढी आवेदन परेको छ । निष्काशन सुरु भएको अन्तिम दिन मंगलबारसम्म १५ लाख २९ हजार ४६० जना आवेदकले १८ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ७२ हजार रुपैयाँको १८ करोड १२ लाख ८६ हजार ७२० कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन्...
चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा ३ महिनापछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए
काठमाडौं &ndash; करिब ३ महिनादेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा बुधवार पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छन् । चीन सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने मिडिया ग्लोबल टाइम्सले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा ज्याक मा १०० जना ग्रामिण शिक्षकसँग भर्चुअल रुपमा भेटेको देखिन्छ । चिनियाँ नीतिको आलोचना गरेपछि ज्याक मा ३ महिनादेखि सार्वजनिक...
कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चको आदेश
काठमाडौं &ndash; कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सार्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी...
तोलामा ५ सयले बढ्यो सुनको भाउ
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार ९२ हजार रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको छापावाल सुन भाउ आज ९२ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आजका लागि तेजावी सुनको सुनको प्रतितोला मूल्य ९२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । मंगलबार तेजावी...
नाकामा चिनियाँ अर्घेलोबारे प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर ढंगले प्रश्न उठाएको छु,सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो : उद्योगमन्त्री भट्ट
काठमाडौं &ndash; विभिन्न बाहानामा एक वर्षदेखि नेपालसँगको व्यापार रोकेको भन्दै उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले चीनको व्यवहारकै कारण चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको २४औं वाषिर्कोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार मन्त्री भट्टले छिमेकी भएर पनि चीनले नेपालसँगको...
इन्फ्रास्ट्रक्चरको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण,तीन दिनमै १४ अर्ब रुपैयाँ बढीको आवेदन
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 19th January 2021
काठमाडौं &ndash; गत शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री शुरु गरेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण देखिएको छ । निष्काशन शुरु भएको तीन दिन (सोमबार) सम्ममामात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बराबरको आईपीओ आवेदन माग भएको छ । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकको जिम्मा पाएको एनआईबीएल एस क्यापिटवलका अनुसार सोमबार...
उखु किसानसँग सरकारले गरेको सहमतिको म्याद गुज्रियो तर पाएनन् किसानले पूर्ण बक्यौता
काठमाडौं &ndash; चिनी मिलबाट ९० करोड बढी बक्यौता दिलाइदिन सरकारले किसान प्रतिनिधिसँग गरेको सहमतिको म्याद गुज्रिएको छ । सरकारले बाचा गरेअनुसार तोकेको समयमा उद्योगहरुबाट सबै बक्यौता रकम नपाएको उखु किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । केही मिलबाट भुक्तानी सुरु भए पनि तोकिएकै समयमा सबै रकम भुक्तानी गरिदिन सरकारले गरेको सहमति पालना नभएको...
मल नल्याउने कम्पनीलाई कारबाही नगर्न कृषि मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय गरेको खुलासा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th January 2021
काठमाडौं &ndash; ठेक्का हत्याएर तोकिएकै समयमा रासायनिक मल नल्याउने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही नगर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको खुलेको छ । मल नल्याउने ठेकदारविरुद्ध आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि ठेकदार जोगाउन मन्त्रालय लागेको पाइएको हो । &lsquo;पुस १४ गते मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र...
सामसुङले लञ्च ग¥यो ग्यालेक्सी एस २१, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं - सामसुङले आफ्नो ग्यालेक्सी एस २१ सिरिजका स्मार्टफोन लञ्च गरेको छ । एक अनलाइन इभेन्ट मार्फत् सामसुङले ग्यालेक्सी एस २१, ग्यालेक्सी एस २१ प्लस र ग्यालेक्सी एस २१ अल्ट्रा गरी तीनवटा स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो । सामसुङका अनुसार ग्यालेक्सी एस २१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तीव्र गतिको चिपको प्रयोग गरिएको छ...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 15th January 2021
काठमाडौं &ndash; नेपालको सेयर बजारकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिमाणको साधारण सेयरका रुपमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको आइपीओ खुलेको छ । मुलुकको पहिलो पूर्वाधार बैंकले ८ अर्ब रपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता धितोपत्र प्रारम्भिक निष्कासनको बिक्री आजबाट थालेको हो । ८ करोडमध्ये १ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ४ लाख कित्ता...
कोरोना महामारीपछि हलमा नयाँ नेपाली फिल्म रिलिज
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 14th January 2021
काठमाडौं &ndash; कोरोना भाइरसका कारण गत फागुणको तेश्रो सातादेखि नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिज हुन सकेको थिएन । गत बर्षको फागुण १६ गते चलचित्र &lsquo;धुलो&rsquo; रिलिज भएको थियो । फागुण ३० गते &lsquo;म यस्तो गीत गाउँछु २&rsquo; र चैत्र ७ गते &lsquo;निरफूल&rsquo; नामक चलचित्र रिलिज गर्ने भनिएतापनि कोरोनाका कारण चलचित्र रिलिज...
काठमाडौं - माघ १ गतेदेखि एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले पुस २३ गते नै भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै अन्तर बैंक एटिएम कारोबारमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै आजदेखि अन्य बैंकको एटिएम प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने भएको हो। यद्यपि महिनामा दुई पटक...
चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा रेकर्ड ब्रेक, १२ लाख ५१ हजार १० जना आवेदक
काठमाडौं - चन्द्रागिरि हिल्सको साधारण सेयर (इपीओ)मा माग भन्दा बढी आवेदन गर्नुका साथै आवेदनले पनि नयाँ रेकर्ड कायम राखेको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आवेदन चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओमा परेको छ । उक्त आईपीओमा २ करोड ४४ लाख ७४ हजार ५३० कित्ताको लागि आवेदन परेको छ । आवेदन खुला भएको अन्तिम दिन १२...
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अकाउन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै ट्वीटरले गुमायो अढाइ अर्ब डलर
एजेन्सी &ndash; अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अकाउन्टमाथि स्थायी प्रतिबन्ध लगाएसँगै सोसल मिडिया कम्पनी ट्वीटरको शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सोमबार ट्वीटर कम्पनीको शेयर मूल्यमा ७ प्रतिशतले गिरावट आयो । जसका कारण ट्वीटर कम्पनीको बजार मूल्य अढाई अर्ब डलरले घट्न पुगेको छ । अर्थात् डोनाल्ड ट्रम्पमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घटनापछि ट्वीटरले...
चीनको एक सुनखानीमा विस्फोट : २२ मजदुर खानीमै थुनिए
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 12th January 2021
काठमाडौं &ndash; चीनको एक सुनखानीमा विस्फोट हुँदा २२ मजदुर खानीमै थुनिएका छन्। उत्तरपूर्वी सानदोङ प्रान्तमा आइतबार विस्फोटन भएको र त्यहाँ हालसम्म पनि मजदुरहरु थुनिएको सिन्ह्वाले जनाएको छ। आइतबार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो २ बजे विस्फोटन भएपछि हालसम्म पनि थुनिएका मजदुरसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। विस्फोटनले संचार प्रणाली नै बिग्रिएको बताइएको छ। हाल मजदुरहरुको उद्धारको...
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः माणिकरत्न शाक्य निर्वाचित
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th January 2021
काठमाडौैं &ndash; नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः माणिकरत्न शाक्य निर्वाचित भएका छन्। आइतबार सम्पन्न महासंघको आठौँ वार्षिक साधारणसभा एवं तेस्रो महाधिवेशनबाट शाक्य पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यसैगरी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अर्जुन रसाइली निर्वाचित भएका छन् भने उपाध्यक्षहरुमा क्रमशः मोहनकाजी शाक्य, दियेशरत्न शाक्य र विपिन रामुदामु निर्वाचित भएका छन्। संघको एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा...
टेस्लाका प्रमुख एलन मस्क बने संसारकै धनी व्यक्ति
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 08th January 2021
काठमाडौं &ndash; कार कम्पनी टेस्लाका प्रमुख एलन मस्क संसारकै धनी व्यक्ति बनेका छन्। स्पेस एक्सका संस्थापकसमेत रहेका उनी अमेजनका मालिक जेफ बेजोसलाई पछाडि पार्दै विश्वकै धनी व्यक्तिमा दरिएका हुन्। बिहीबार ६ प्रतिशतले बढेको टेस्लाको सेयरले एलन मस्कको सम्पत्ति १ सय ९१ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्&zwj;याएको ब्लुमबर्ग पत्रिकाले जनाएको छ। योसँगै बेजोसको सम्पत्ति मस्कको...
गौरीशंकर ग्यास उद्योगमा सिलिन्डर पड्किएर आगलागी, विस्तृत विवरण आउन बाँकी
काभ्रे &mdash; बनेपा &ndash; १३ स्थित गौरीशंकर ग्यास उद्योगमा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगलागी भएको छ । ग्यास लिक भएर आगलागी सुरु भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमल्सिनाले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार २ जना घाइते भएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी...
हाम्रा सबै आर्थिक योजना असफल भए : किम जोङ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 06th January 2021
एजेन्सी &ndash; उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले लगभग सबै क्षेत्रबाट आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्ने योजना असफल भएको स्वीकारेका छन्। मंगलबार भएको सत्तारूढ दल वर्कर्स पार्टीको सम्मेलनमा उनले आर्थिक योजनाहरू असफल रहेको स्वीकारेको उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमले नै जनाएका छन्। किमले पछिल्ला पाँच वर्षलाई राष्ट्रका लागि खराब मध्येकै खराब भएको बताएका हुन्। अहिलेका...
आजको सुनचाँदी दर भाउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 04th January 2021
काठमाडौँ । सुनको भाउ आज तोलामा ८ सयले वृद्धि भएको छ । यो सँगै सुनकोे भाउ तोलामा ९५ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको भाउ अस्थिर रहेकाले नेपाली बजारमा पनि भाउमा उतारचढाव आइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । यस्तै, चाँदी आज तोलाको...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 03rd January 2021
काठमाडौँ &ndash; नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार ५०० रूपैयाँ कायम भएको छ । शुक्रवार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । यस्तै तेजाबी सुन पनि आज स्थिर रहेको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रतितोला ९४...
एक महिनाभित्र उखु किसानलाई भुक्तानी दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 01st January 2021
काठमाडौं &ndash; सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र क्रेता वा उद्योगबाट भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । &lsquo;आफूले बेचेको समानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य...
लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक अग्रवाल पर्साबाट पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 31st December 2020
काठमाडौं &ndash; प्रहरीले लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाललाई पक्राउ गरेको छ । पर्साबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो । महानगरीय अपराध महाशाखा, बानेश्वरको आग्रहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले उनलाई पक्राउ गरेको प्रदेश नं. २ प्रहरी प्रमुख डीआईजी धिरजप्रताप सिंहले बताए । अग्रवाललाई काठमाडौं पठाउने वा नवलपरासीबाटै कानुनी प्रक्रिया थाल्ने भन्ने टुंगो लागेको...
नेकपाको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्काको माग राख्दै प्रचण्ड–नेपालले लेखे बैंकलाई पत्र
काठमाडौं &ndash;प्रचण्ड&ndash;नेपाल नेतृत्वको नेकपाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गरि पाउँ भनि बैंकहरूलाई पत्र लेखेको छ। प्रचण्ड&ndash;नेपाल नेतृत्वको नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बैंकहरुलाई पत्र लेखेर खाता रोक्का गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। दुई अध्यक्षले लेखेको पत्रमा नेकपामा उत्पन्न विवादका कारण उत्पन्न परिस्थितिका...
आन्दोलन गर्न आएका उखु किसानको हृदयघातबाट निधन
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th December 2020
काठमाडौं - बक्यौता माग गर्दै १६ दिनसम्म माइतीघरको आन्दोलनमा सहभागी ६५ वर्षीय उखु किसानको हृदयघातका कारण मंगलबार निधन भएको छ । सर्लाही धनकौल छोटवल टोलका नारायण राय यादवको मंगलबार बिहान शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा उपचारका क्रममा निधन भएको आन्दोलनमा सहभागी अर्का किसान मुकेश ठाकुरले बताए । उनलाइ मंगलबार विहान हृदयघात...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 28th December 2020
गोरखा&ndash; मनकामना केबुलकार सेवा बन्द हुने भएको छ । नियमित मर्मतसम्भारका लागि सात दिन बन्द गरिने भएको हो । यही पुस १४ गतेदेखि पुस २० गतेसम्म बन्द गरिने मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए । कोरोनाको महामारीसँगै नौ महिना बन्द रहेको केबुलकार गत मङ्सिर २८ गतेबाट पुनः सञ्चालनमा...
सुनको मूल्य तोलामा ९ सयले घट्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 23rd December 2020
काठमाडौँ - बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९०० ले ओरालो लागेको छ । छापावाला सुन मंगलबार प्रतितोला रु ९४ हजार ९०० मा कारोवार भएको थियो । बुधबार प्रतितोला रु ९०० ले ओरालो लागी रु ९४ हजार कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै तेजाबी सुन मंगलबार प्रतितोला रु...
खर्च धान्न नसक्ने भएपछि ५५ बर्ष पुरानो पाँचतारे होटेल अन्नपूर्ण बन्द,सोल्टीले ४० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने
कामठमाडौं &ndash; दरबारमार्गस्थित नेपालको पहिलो पाँचतारे होटेल &lsquo;डेल अन्नपूर्ण होटेल&rsquo; एक वर्ष पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ । ५५ वर्ष पुरानो पाँचतारे होटेल कोभिड&ndash;१९ का कारणले विदेशी पर्यटक नआएका कारण खर्च धान्न मुस्किल भएको भन्दै बन्द गर्न लागिएको हो । व्यवस्थापनले बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै होटेलका ३ सय ६० भन्दा बढी...
२० प्रतिशतले बढ्यो तरकारीको मुल्य
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 21st December 2020
काठमाडौँ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा तरकारीको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा तरकारीको मूल्य २० दशमलव ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै गेडागुडीको मूल्य पनि १३ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै कात्तिकमा वार्षिक विन्दुगत...
कोभिड १९ महामारीका कारण पिडित भएका व्यवसायीहरु द्वारा आन्दोलन घोषणा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 19th December 2020
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीका कारण पेशा, व्यवसायमा समस्या भोगेका व्यवसायीहरु एकताबद्ध भएर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ कोरोना भाईरसका कारण लकडाउन घोषणापछि पेशा, व्यवसाय धरासायी भएको र राज्यले सेवामूलक तथा विभिन्न उद्योग, व्यवसायको समस्या समाधान गर्न उदासिन भएको भन्दै ७ दिनको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलन घोषणा...
किसानको आन्दोलनमा समर्थन गर्न पुगे उधोगमन्त्री भट्ट,मन्त्री हिँडेलगत्तै उनीविरूद्ध नै नाराबाजी
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th December 2020
काठमाडौं &ndash; उखु किसानहरुको आन्दोलनमा सर्मथन गर्न माइतीघर मण्डला पुगेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शनिबारसम्म उखु किसानहरुको खातामा पैसा जम्मा नभए आइतबारदेखि उद्योगीहरुलाई पक्राउ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेको स्थानमा पुगेर मन्त्री भट्टले भुक्तानीका लागि शनिबार पनि वाणिज्य बैंकहरुको शाखाहरु खुल्ला गर्ने जानकारीसमेत दिएका थिए। &lsquo;भोलि...
साढे २३ किलो सुनका मालिक नभेटिएपछि लिलाम बिक्री गर्ने तयारी
काठमाडौं &ndash; वीरगञ्ज महानगरपालिका&ndash;५, रेशमकोठीमा रहेको गणेश अपार्टमेन्टबाट बरामद साढे २३ किलो सुनका मालिक प्रहरीले भेटाउन सकेन । सुन मालिक नभेटिएपछि प्रहरीले राजश्व अनुसन्धान विभागको पथ्लैयास्थित कार्यालयमा बरामद सुन, चाँदीसहितका गरगहना बुझाएको छ । विभागले सुनलाई लिलाम बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । बिक्रीबाट आएको रकम राज्यकोषमा जम्मा हुनेछ । जिल्ला प्रहरी...
उद्योगमन्त्री भट्ट भन्छन्-'उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै नेताहरुको फोन आयो'
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 17th December 2020
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै नेताहरुको फोन आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । किसानको नाममा ट्विटरमा ठूलो वकालत गर्ने तर मलाई फोन गरेर फलानो उद्योगी नपक्रन...
बढ्यो सुनको भाउ,कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ निरन्तर दोश्रो दिन पनि वृद्धि भएको छ । पुस २ गते, बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ९३ हजार ५०० रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । पुस महिनाको...
हलो–जुवा बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिए उखु किसान
काठमाडौं - चिनी उद्योगलाई उखु बेचेको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत किसानले बिहीबार हलो र जुवासहित प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरुले बिहीबार हलो र जुवासहित प्रदर्शन गरेका हुन् । किसानहरु धर्ना बसेको स्थान अगाडि छातीमा प्लेकार्ड झुण्ड्याएका किसानले हलो जोतिरहेको अर्थ दिने गरी हलो र जुवा...
८ महिनापछि शुरु भयो काठमाडौं–दिल्ली नियमित उडान
काठमाडौं &ndash; आजबाट चैत २०७६ यता पहिलो पटक भारतको राजधानी दिल्लीका लागि काठमाडौंबाट नियमित हवाई उडान सूचारु भएको छ । सरकारले ११ चैतपछि देशव्यापी लकडाउन र हवाई उडानमाथि प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि बन्द भएको यो रुटमा आज नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले पहिलो उडान गर्दैछ । ए&ndash;३२० जहाजको उडान सवा ११ः२० बजेका...
सवा करोडको लगानीमा हिलपार्कमा 'जिप लाइन' सुरु
मदन न्यौपाने रुपन्देही - बुटवल मा पहिलो पटक साहासिक खेल जिप लाइन सुरु भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गर्दै ४ जना युवाको संयुक्त लगानीमा जिप लाइन संचालनमा आएको हो । जिप लाइनको लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री लिला गिरिले उद्घाटन गरे । उनले खेलले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बृद्धि हुने अपेक्षा...
बीबीसी मास्टर सेफको टप ३ मा पुगे सन्तोष साह
लन्डन &mdash; आफ्नो सबैभन्दा प्रिय व्यक्तिलाई समर्पित गरेर खाना बनाउनुपर्ने राउन्डमा उनले आमालाई सम्झिए । सन्तोष साह १२ वर्ष छँदा सिरहाको कर्जन्हा आसपास नदी किनारमा श्रम गर्न जान्थे । गरिबीले कलिलै उमेरमा काम नगरी हातमुख जोर्न सम्भव थिएन । काम गरेर भोकाएको छोरालाई बट्टामा खाजा बोकेर उनकी आमा पुग्थिन् । आमाले...
सुनको भाउ तोलामा आठ सयले बढ्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 16th December 2020
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ तोलामा आठ सय रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार तोलामा ९२ हजार ३ सयमा कारोबार भएको छापावल सुनको भाउ बुधबार ९३ हजार एक सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सुनको धेरै मात्रामा खपत हुने मंसिर महिना सकिने बित्तिक्कै सुनको भाउ बढेको हो । तेजाबी सुनको भाउ ९२ हजार ६५०...
भक्तपुरको कुखुरा फर्ममा भिषण आगलगाी : झण्डै ३ हजार कुखुरा जले
काठमाडौं &ndash; भक्तपुरको एक कुखुरा फर्ममा आगलागी भएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका&ndash;८ जितपुरमा दीपक गिरीले सञ्चालन गरेको कुखुरा फर्ममा आगलागी भएको हो । गहुँको छ्वालीले छाएको टहरोमा भुसे चुलोबाट आगो सल्किएको थियो । आगलागीबाट सबै टहरा नष्ट हुँदा प्यारेज जातका करिव २ हजार ७०० कुखुरा जलेका छन् र करिब १५ लाखको क्षति...
भन्सार छली ल्याएको ४९ बोरा चिनीसहित चारजना पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 15th December 2020
विराटनगर &ndash; प्रहरीले मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाबाट ४९ बोरा चिनीसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएको सो चिनी एक लाख ४७ हजार मूल्यबराबरको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिए । सोमबार बेलुका धनपालथान गाउँपालिका&ndash;४ स्थित सुनिल राजवंशीको गोदामबाट ४९ बोरा चिनीसहित मोरङ रंगेली...
११ हजारभन्दा बढीले पाए कोरोना बीमा भुक्तानी
काठमाडौं - कोरोना बीमा गरेर ११ हजारभन्दा धेरै संक्रमितले भुक्तानी पाएका छन् । भुक्तानी रकम पनि एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सोमबारसम्म ११ हजार १ सय ५४ जनाले १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक...
‘चिसो मान्छे’मा नायिका स्वस्तिमाले बुझिन १८ लाख पारिश्रमिक
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 14th December 2020
काठमाडौं &ndash; नायिका स्वस्तिमा खड्काले चलचित्र &lsquo;चिसो मान्छे&rsquo;मा १८ लाख पारिश्रमिक वुझेकी छिन् । स्वस्तिमाले चलचित्र करिअरमा वुझेको सबैभन्दा महंगो पारिश्रमिक यही नै हो । दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा बन्न लागेको यो चलचित्रलाई शर्मिला पाण्डेले निर्माण गर्न लागेकी हुन् । यो टिमसँग स्वस्तिमाले चलचित्र &lsquo;लभ लभ लभ&rsquo;मा काम गरेकी थिइन्...
उखु किसानको आन्दोलनमा राजमोको पनि समर्थन,किसानमाथि शोषण गर्ने चिनी मिललाई सरकारलेनै संरक्षण गरेको आरोप
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय जनमोर्चाले चिनी मिलहरूले सरकारको संरक्षणमा किसानमाथि शोषण गरिरहेको आरोप लगाएको छ । जनमोर्चा उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, &lsquo;भुक्तानी नगर्ने चिनी मिलमाथि कारबाही गर्न, किसानमाथिको शोषण बन्द गर्न, उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्न, बिक्री गरिएकाको तत्काल भुक्तानी गर्न र किसानलाई आवश्यक...
महेन्द्रनगर &ndash; कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका&ndash;७ का उमेश धामी गत असारमा मुग्लानमा समस्यामा परे । धन कमाउने सपनामा दुई वर्षअघि मलेशिया पुगेका धामी कोरोना कहरमा आफू कार्यरत कम्पनी बन्द भएर रोजगारी गुमेपछि केही समय बिचल्लीमा परे । आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि पढाइ छाडेर मलेशिया पुगेका धामी स्वदेश फर्किएर आयमूलक काममा सक्रिय भइसकेका...
अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्नेत डिल्लीबजार कारागार चलान
काठमाडौं &ndash; ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्&zwj;त दीप बस्न्यात पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । आइतबार विशेष अदालतले हाजिर भएका उनलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशद्वय...
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिन अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्नेत विशेष अदालतमा उपस्थित
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 13th December 2020
काठमाडौं &ndash; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्त्यात विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिन उनी केहीबेर अघि अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा बस्नेतको बयान सुरु भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्प पाण्डेले बताए। बयानपछि थुनछेक बहस...
वर्ष दिनसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उखु किसानले फेरि थाले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन
काठमाडौं &ndash; सर्लाहीका उखु किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् । चिनी मिल सञ्चालकबाट बक्यौता रकम उठाइदिन सरकारले गरेको बाचा पुरा नभएको भन्दै आइतबारदेखि उनीहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेका छन् । उनीहरूले गत वर्षको पुस १६ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । माइतिघर मण्डलाबाट निकास ननिस्किए...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर १०८ रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं &ndash; नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । शनिबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोलमा एक रुपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलमा दुई रुपैयाँले मूल्य बढेको निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्ययले जानकारी दिए । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य १०८ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल तथा मटितेलको मूल्य ९१...
भोलिदेखि सदर चिडियाखाना खुल्ने,अनलाइनबाटै टिकट काट्न सकिने
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 09th December 2020
काठमाडौं &ndash; गत चैतदेखि बन्द भएको सदर चिडियाखाना भोलि (बिहीबार)देखि खुल्ने भएको छ । तर कोरोना महामारीका कारण पहिले जस्तो चिडियाखानामा खुल्ला तरिकाले घुम्न भने पाइने छैन । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द भएको चिडियाखाना ९ महिनापछि खुल्दा बढीमा एकदेखि डेढ घण्टाभित्र चिडियाखानाबाट निस्कनुपर्ने नियम बनाइएको छ । कोभिड १९ संकट...
दाङका १० क्रसर उद्योग बन्द
दाङ &ndash; मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका दाङका दस वटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। तुलसीपुर क्षेत्रमा सञ्चालित गणेश बालुवा वासिङ उद्योग, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन वासिङ उद्योग, स्वर्गद्वारी स्क्रिन प्लान्ट प्रा.लि., जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग, मंगलम् बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको हो । त्यस्तै लमही क्षेत्रको पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ...
सेयर बजारमा हरियाली, ७२ अंकले बढ्यो नेप्से
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th December 2020
काठमाडौं &ndash; साताको दोस्रो दिन सोमबार सेयर बजार बढेर हरियाली देखिएको छ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ७२ दशमलव २८ अंकले बढेर २ हजार ४ दशमलव ३९ अंकमा पुगेको छ । यसअघिको कारोबार आइतबार १२३ अंकले नेप्से परिसूचक घटेको थियो । आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम भने घटेको छ ।...
हवाई उड्डयन सम्बन्धी ईयूले जारी गरेको स्टेटमेन्ट स्वागतयोग्य : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौँ &mdash; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत दिनु खुसीको कुरा भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले जारी गरेको स्टेटमेन्ट स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् । पछिल्लो समय नेपालले नागरिक...
खाने तेलको मूल्यमा मनपरी वृद्धि,सनफ्लावर तेलको भाउ दुई सय रुपैयाँ भन्दामाथि
काठमाडौं &ndash; बजारमा तोरी, सोयाबिन र सूर्यमुखी तेलको मूल्य मनपरी ढंगले वृद्धि भएको छ । एक महिनाको अवधिमा दुई प्रकारका तेलको भाउ प्रतिलिटर ४० देखि ५० रुपैयाँसम्मले वृद्धि भएको हो । तिहारसम्म १३० देखि १४० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा कारोबार भएको सोयाबिन तेल १७० देखि ८० रुपैयाँ पुर्&zwj;याइएको छ । यस्तै १६० रुपैयाँमा...
श्रोत नखुलेको १६ लाख भन्दा बढी रकमसहित भैरहवाबाट एकजना पक्राउ
बुटवल&ndash; रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका&ndash;६ का २१ वर्षीय श्याम कुमार बनियालाई प्रहरीले श्रोत नखुलेको १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको नियमित चेकचाँचका क्रममा बनिया भैरहवा बसपार्क नजिकै शान्तिनगर टोलबाट पक्राउ परेका हुन्। लु ३९ प ४४५७ नम्बरको स्कुटरमा एक हजार दरका १०३५ थान र पाँच सयदरका...
१ सय २३ अंकले घट्यो नेप्से
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 06th December 2020
काठमाडौं &ndash;सेयर बजारको परिसूचक नेप्से आइतबार १२३ अंकले घटेको छ। २ बजेर १३ मिनेट जाँदा नै नेप्से ६ प्रतिशतले घटेपछि सर्किट ब्रेक लागेको छ। सर्किट ब्रेकपछि आजका लागि बीचमै कारोबार बन्द भएको छ। आजको कारोबारपछि नेप्से १९३२ अंकमा झरेको छ। यस दिन ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ।...
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउमा सामान्य गिरावट आएको छ । गत साताको चार दिनसम्म निरन्तर बढेको सुनको भाउ आईतबार तोलामा दुई सय रुपैयाँले घटेको हो । शुक्रबार ९२ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आईतबार ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आजका...
बजारमा अधिक तरलता भएपछि ५० अर्ब उठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं &ndash; बजारमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ५० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउने भएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्था यतिबेला एक खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको छ । अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि बैंकहरुबाट ५० अर्ब तरलता उठाउन लागेको हो । बुधबार...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 01st December 2020
काठमाडौँ - नेपालले कोरोना माहामारीका कारण ०७६ चैत ९ गतेदेखि रोकेका भारतसहित सबै मुलुकका काठमाडौंका लागि हुने व्यवसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार बुधबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले मन्त्रालयलाई भारतसहित सबै मुलुकमा उडान सुरु गर्न अनुमति दिएको छ । &lsquo;नेपाल भारत उडानबारे...
आज पनि घट्यो सुनको भाउ,तोलाको कति ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th November 2020
काठमाडौं - नेपाली बजारमा सुनको भाउ लगातार ओरालो लागेको छ । आइतबारको तुलनमा सोमबार सुनको भाउ तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेको छ ।आइतबार प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छापावाल सुनको भाउ सोमबार भने ९० हजार रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै सोमबार तेजाबी...
कोरोनाबाट सृजित चुनौती सामना गर्न सरकार प्रयासरतः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं &ndash; नेकपा महासचिव एव्म अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड&ndash; १९ का कारण समस्यामा परेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन लगानी अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जनामा सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिपरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २३ औं वार्षिकोत्सव तथा २२औँ वार्षिक साधारणसभामा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार मात्रैले कोभिडले...
उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्षका लागी आज मतदान हुँदै
काठमाडौं &ndash; नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्ष चुन्न आज मतदान हुने भएको छ । शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आइतबार आएको महासंघको नेतृत्वले कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर नवननिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले सहमतिबाट कोषाध्यक्ष चयन गर्नु पर्ने माग राखे । गोल्छा पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी...
सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम, कारोबार रकम ९ अर्ब नाघ्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th November 2020
काठमाडौं &ndash; नेपाली सेयर बजारमा पुनः नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार भएको कारोबारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक र सेयर कारोबार रकम दुबैले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । आइतबार नेप्से परिसूचक ३.८० प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेर १ हजार ९ सय ६० अंक भन्दा माथि परिसूचक...
लगातार ओरालो लाग्दै सुनको भाउ,आज तोलामा ६०० सयले घट्यो
काठमाडौँ&ndash; सुनको मूल्य आज (आइतबार) प्रतितोला ६०० रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आज प्रतितोला ९० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोवार भएको थियो । यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ...
काठमाडौं &ndash; नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । योसँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २० औं अध्यक्ष बन्ने निश्चित भएको छ । नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष...
काठमाडौँ&ndash; स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला रु २०० ले घटेर रु ९१ हजार ३०० मा कारोवार भएको छ । बिहीबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ९१ हजार ५०० मा कारोवार भएको थियो । तेजाबी सुन प्रतितोला...
नयाँ नेतृत्व चयन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा आज सुरु हुँदै,निर्वाचन शनिबार हुने
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 26th November 2020
काठमाडौं &ndash; नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं साधारण सभा आज बिहीबार राजधानीमा सुरु हुँदै छ। गत चैत २८ मै हुनपर्ने साधारण सभा कोरोना महामारीका कारण ढिला भएको हो। महासंघले सार्वजनिक गरेको साधारण सभा तथा निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै सभाको उद्घाटन गर्नेछन्। बिहान साढे...
आज पनि सुनको भाउ तोलामा एक हजारले घट्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 25th November 2020
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ आरालो लाग्ने क्रमले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ । बुधबार सुनको प्रतितोला मूल्य एक हजार रुपैयाँले सस्तिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार प्रतितोला एक हजार आठ सय रुपैयाँले सुनको भाउ घटेको थियो । महासंघले बुधबारको कारोबारका लागि छापावाल सुनको मूल्य ९१ हजार पाँच...
सैलुङले दोस्रो पटक पनि मल ल्याउन सकेन,साढे ५ करोड धरौटी जफत
काठमाडौं &ndash; रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएको सैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो पटक कारबाही गरेको छ । ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन ठेक्का लिएको उसले तोकिएको समयमा ल्याउन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेर धरौटीबापतको पाँच करोड ५६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ जफत गरेको कम्पनीले जनाएको छ । सैलुङलाई...
चलचित्रकर्मीहरु भन्छन्-‘सरकारले नखोले हामी आफैं हल खोल्छौ,अब हाम्रो पनि धैर्यताको बाँध टुटेको छ '
काठमाडौं &ndash; विगत ८ महिनादेखि बन्द रहेका चलचित्र भवनहरु अझै सुचारु हुन सकेका छैनन् । चलचित्र विकास बोर्डसँगको छलफलमा चाडै नै हल खुल्ने आश्वासन पाएका चलचित्रकर्मीहरु निराश बनिरहेका छन् । दशैं, तिहार जस्ता ठूला पर्वमा पनि हल संचालनमा नआउँदा हल व्यवसायीहरुले करोडौ घाटा व्यहोरेका मात्र छैनन्, चलचित्र क्षेत्रमा लागेका हजारौ...
सुनको भाउ एकैदिन तोलामा १८ सयले घट्यो
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ एकैदिन तोलामै एक हजार ८ सय रुपैयाँले घटेको छ । सोमबारको बजार भाउको तुलनामा सुनको भाउमा ठूलो गिरावट आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार प्रतितोला ९४ हजार तीन सय रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको सुनको भाउ मंगलबार ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै...
८ वर्षअघि २४ करोड रूपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले सकारेको जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दै सुधिर बस्नेत सर्वोच्च पुगे
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 23rd November 2020
काठमाडौं &ndash; बैंकले लिलामी सकारेको २४ रोपनी जग्गा फिर्ता लिन सुधिर बस्नेत मुख्य सञ्चालक रहेको ओरियन्टल बिल्डर्सले अदालत गुहारेको छ। काठमाडौंको धापासीमा रहेको २४ रोपनी जग्गा आफ्नो कम्पनीको नाममा फिर्ता लिन बस्नेतले सर्वोच्च अदालत गुहारेका एनआइसी बैंकका क्वालिटी एसुरेन्स इकोसिस्टम प्रमुख अर्जुनराज खनियाँले जानकारी दिए। ८ वर्षअघि २४ करोड रूपैयाँ ऋण तिर्न...
काठमाडौं &ndash; आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको जानकारीअनुसार हिजोकै मूल्यमा आज सुनचाँदीको कारोबार भइरहेको छ । आज छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ९४ हजार ३०० रूपैयाँ छ। यसैगरी, तेजाबी सुनको भाउ तोलामा ९३ हजार ८०० र चाँदीको भाउ एक हजार २१० रूपैयाँ कायम छ।...
१० मंसिरबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन खुल्दै
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 22nd November 2020
काठमाडौं । कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनर्उद्धार, पुनत्थान र व्यवसायिक निरन्तरताका लागि सरकारले ५० अर्ब कोषबाट कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि अनुसार संचालक समितिको बैठकले मंसिर १० बाट कर्जा प्रवाहका लागि आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त समितिको...
भदौमा वाणिज्य बैंकमा नियुक्ति पाएका ईश्वर पोखरेलका सम्धी अझै कार्यालय गएका छैनन्
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 10th November 2020
काठमाडौं । नेकपा नेतृत्वको सरकारका मन्त्रिहरु कति नातावादमा गिजोलिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण दर्जनौँ छन्। तर, आज हामी तपाइँहरुलाई राष्ट्रबैंकको एउटा विषयमा यहाँ जानकारी दिँदैछौँ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा एकजना विवादित पात्रलाई नियुक्ति दिए। उक्त नियुक्तिको सबैले आलोचना र टिप्पणी...
कोभिड–१९ ले १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर जीडीपीमा क्षति
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 05th November 2020
काठमाडौं । कोभिड&ndash;१९ ले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले २०७६/७७ मा उत्पादकको मूल्यमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर जीडीपीमा क्षति पुगेको जनाएको हो । &lsquo;अध्ययन कार्यदलले योजना...
काठमाडौंको ओमबहालबाट १ करोड हुन्डीसहित ३ जना पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 03rd November 2020
काठमाडौं &ndash; एक करोड हुन्डीसहित काठमाडौंमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा झापाका विकास मित्तल र कमल मित्तल तथा पर्वतका गणेश पौडेल रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले उनीहरुलाई सोमबार काठमाडौंको ओमबहालबाट पक्राउ गरेको हो । डिआईजी सहकुल थापाले पक्राउ परेकाहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।...
स्वयम्भूको जुवा खालबाट पक्राउ परे पूर्वराज्यमन्त्री रायसहित १० जुवाडे
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 01st November 2020
काठमाडौं - जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा पूर्वराज्यमन्त्री खोवारी रायसहित १० जना पक्राउ परेका छन्। शनिबार दिउँसो २ बजे काठमाडौं महानगरपालिका १५ स्वयम्भू फेमली क्वार्टर नजिकबाट पूर्वराज्यमन्त्रीसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त, स्वयम्भूले पाएको गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले साइँली तामाङको घरमा छापा मारेको थियो। त्यहाँबाट प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर,...
जब प्रहरीले घर घेराउ गर्यो तब जुवाडेहरू आपसमा टीकाटालोको नाटक सुरु गरे!
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th October 2020
दाङ - बाँकेको नेपालगञ्जवाट साढे २९ लाख रकमसहित पक्राउ परेका दस जना जुवाडेलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का सन्तोष थापा, नेपालगञ्ज ६ का मेघनाथ कुचबन्दिया, नेपालगञ्ज वडा नं. ४ का नवीन घिमिरे, नेपालगञ्ज वडा नं. १० का टोपबहादुर शाही, नेपालगञ्ज वडा नं. ४...
कात्तिक मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 13th October 2020
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ ठूलो संख्यामा बढ्न थालेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कात्तिक मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी गराएका छन् । सरकारले गत वर्ष ११ चैतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गरिरहको छ । यात्रुको ओहोरदोहोर रोकिए पनि...
काठमाडौं &ndash; नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढ्न थालेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । आज छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको...
पीसीआर खरिदमा करोडौंको भ्रष्टाचार
जनकपुरधाम &ndash; कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका निमित्त महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी अनियमितता गरेको पाइएको छ। सप्तरीको राजविराज, धनुषाको जनकपुर र रौतहटको गौरमा कोरोना परीक्षणका लागि &lsquo;रियल टाइम&rsquo; पीसीआर मेसिनसहित विभिन्न १४ थान उपकरण खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो। प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति...
ओपोले ल्यायो नेपाली बजारमा 'ओपो एफ १७ प्रो' फोन,६ वटा एआई पोट्रेट क्यामरासहितका अन्य विशेषता
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th September 2020
काठमाडौं - ओपोले नेपाली बजारमा नयाँ फोन ल्याएको छ। 'ओपो एफ १७ प्रो' नामको उक्त फोनको बुकिङ पनि खुला भइसकेको छ। ओपो नेपालका पिआर म्यानेजर सुरज महर्जनका अनुसार यो फोन विशेषगरी युवाहरूलाई लक्षित छ। यो फोनको मुख्य विशेषता भनेको यसमा भएका ६ वटा क्यामरा हुन्। जसमा पछाडि चार वटा र अगाडि...
नेटवर्किङ मार्फत ठगीमा संलग्न २५ कम्पनी र ५० जनालाई पक्राउ गर्न सीआइबीलाई पत्र
काठमाडौं &ndash; वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) सँग ठगीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सहयोग मागेको छ । नेपालमा प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको गुनासोका आधारमा विभागले अध्ययन गर्दै ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सहयोग मागेको हो । विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २५ कम्पनी र ५०...
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं &ndash; सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादित बनेको ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गत चैतमा...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 28th September 2020
काठमाडौं &ndash; व्यवसायी चन्द्र ढकाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार गरेको स्वास्थ्य परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिएको ढकाल आफैंले जानकारी दिएका छन् । &lsquo;जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालनाका साथ सतर्कता र सजगता अपनाइरहेको भए पनि हिजो (आइतबार) गरेको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा आज बिहान मेरो स्वास्थ्य रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ,&rsquo; ढकालले एक सूचनामा...
काठमाडौं &ndash; भारतको चर्चित कम्पनी रिलाइन्स समूहका मालिक अनिल अम्बानीले लन्डन कोर्टलाई पहिलोपटक जवाफ फर्काएका छन् । ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका अम्बानीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत लन्डन अदालतलाई आफूले सामान्य जीवन बिताइरहेको जानकारी दिएका छन् । घरमा एउटा मात्र कार रहेको र वकिलको फिस तिर्न गहना बेचेको उनले अदालतलाई बताएका छन् । व्यापारको सिलसिलामा...
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 27th September 2020
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि गत बुधबार परीक्षणका लागि स्वाब दिएका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बिहीबार कोरोना पुष्टि भएको हो । आफूलाई बिहीबार कोरोना पुष्टि भएपछि अहिले होम आइसोलेसनमा बसिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोरोना लागेपनि...
हिमालय एयरलाइन्सको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ यथास्थितिमा राख्न पर्यटनमन्त्री भट्टराईको निर्देशन
काठमाडौं &ndash; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हिमालय एयरलाइन्सले पाएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सुविधा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री भट्टराईले आइतबार प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलसहित प्राधिकरणको टोलीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर त्रिभुवन विमानस्थलमा हिमालयलले प्राप्त गरेको ग्राउण्ड हृयाण्डिलिङ सुविधा बारे छलफल गरेका थिए...
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट,आज कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
काठमाडौं &ndash;सुनको मूल्य आइतबार सामान्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेर ९३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। गएको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ९३ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो। तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा पनि ६ सय रुपैयाँले घटेर ९२ हजार ८...
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य,आज कतिमा कारोबार ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 25th September 2020
काठमाडौं &ndash; लगातार ३ दिन घटेको सुनको मूल्य आज बढेको छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज ९३ हजार ९ सय कायम भएको छ । मंगलबार १७ सयले घटेको सुन बुधबार पनि १२ सयले घटेको थियो । बिहीबार सुन १२ सयले...
त्रिशुलीमा खसेर आगो लागेको पेट्रोल ट्यांकर दुर्घटना शंकास्पद
काठमाडौं &ndash; असोज ४ गते त्रिशुली नदीमा खसेर आगो लागेको ट्यांकर दुर्घटना शंकास्पद रहेको भन्दै छानबिन गर्न नेपाल आयल निगमले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । दुर्घटनास्थल धादिङको गजुरीको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिएको निगमको थानकोट प्रादेशिक डिपोले जनाएको छ । दुर्घटना नियोजित हो की भन्ने आशंकामा प्रहरीलाई छानबिन...
विद्युत प्राधिकरणले भन्यो- 'मर्मत सम्भार गर्दा विद्युत आपूर्ति प्रभावित भएको हो'
काठमाडौं &ndash; नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ । एक सूचना जारी गरेर प्राधिकरणले प्रशारण एवम् वितरण लाइनको सञ्चालन तथा विद्युत आपूर्तिको निरन्तरता, विद्युत महशुल र भुक्तानी सम्वन्धमा उपभोक्ताले देखाएको चासो र चिन्ताको सम्वन्धमा सजग रहेको बताएको छ । &lsquo;विद्युतको प्रशारण तथा वितरण संरचना जमिनमाथि...
मल नल्याउने ठेकदारलाई कारबाही गर्न अदालतबाट बाटो खुल्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 24th September 2020
काठमाडौं &ndash; समयमै मल नल्याउने दुई ठेकदार कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन उच्च अदालत पाटनले बाटो खोलिदिएको छ । शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्ध, धरौटी जफत र कालोसूची सिफारिस रोक्न माग गर्दै दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघिमुख्य न्यायाधीश नहकुल...
प्याजको भाउ आधा घट्यो !
काठमाडौं &ndash; बिहिबार बिहान महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोली मनोहराको तरकारी बजारमा पुग्यो । बजारमा रहेको सुनापति आलु प्याज सप्लायर्सले अनुगमन टोलीलाई प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ बताए । प्याजको खरिद मूल्य अनुगमन टोलीले मागेपछि नजिकैको अर्का प्याज पसलले एकाएक डराए । अनुगमन टोलीका एक प्रतिनिधिकाअनुसार सलेज आलु प्याज भण्डारले तत्कालै प्रतिकिलो...
नेपालमै पहिलो पटक कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधी उत्पादन सुरु
काठमाडौं &ndash; कोरोना भाइरसको हालसम्म कुनै खोप र औषधी पत्ता नलागे पनि संक्रमितको उपचारमा विकल्पका रुपमा प्रयोग हुने फ्याभिपिराभिर २०० को नेपालमै उत्पादन सुरु भएको छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले नेपालमै पहिलो पटक कोरोना रोकथामको औषधी फ्याभिपिराभिर २०० उत्पादन सुरु गरेको हो । कम्पनीका अनुसार विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाका संक्रमित...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 21st September 2020
काठमाडौं &ndash; कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै जारी लकडाउन आदेशले बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजदेखि खुलेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड निर्धारण गरी उडान गर्नका लागि एयरलाइन्सहरूलाई आजदेखि अनुमति दिएको छ। सोहीअनुसार एयरलाइन्सले आजदेखि उडान सुरू गरेका छन्। आजदेखि खुल्ने उडान सामान्य अवस्थाको तुलनामा २५ प्रतिशतमात्र हुने...
मल नल्याउने ठेकदारद्वारा सरकारविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दायर,प्रभावशाली अधिवक्ताहरु भिड्दै
काठमाडौं &ndash; तोकिएको समयमा मल नल्याउने दुई ठेकदार कम्पनीले सरकारविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दायर गरेका छन् । उच्च अदालतमा ठेक्का सम्झौता रद्द र धरौटी जफत नगर्न भन्दै दायर गरिएको पहिलो दुई उत्प्रेष्ण निवेदनमा छलफल चलिरहेकै बेला कालोसूची सिफारिसविरुद्ध ठेकदार कम्पनीले पुनः अर्को मुद्दा दायर गरेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ...
मर्जरको कुनै निर्णय नभएको सिभिल बैंकको स्पष्टिकरण
काठमाडौं &ndash; सिभिल बैंकले हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा जाने कुनै प्रकारणको निर्णय नभएको स्पष्टिकरण दिएको छ । हिमालयनसँग मर्जरमा जान लागेको भन्दै हल्ला फैलिएपछि आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सिभिल बैंकसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोमबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङले नेप्सेलाई जवाफ पेश गर्दै मर्जरमा जानका लागि कुनै...
३४ अर्ब बढी शंकास्पद रकम ओसार–पसारमा नेपाली बैंक र कम्पनीहरु संलग्न रहेको खुलासा
काठमाडौं &ndash; गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसार&ndash;पसारमा नेपालका केही बैंक र कम्पनीहरू संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने सरकारी निकाय &lsquo;फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क&rsquo; (फिनसेन) ले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल &lsquo;इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट&rsquo; (आईसीआईजे) ले...
सबै सिटमा यात्रु राखेर यातायात संचालन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 20th September 2020
काठमाडौं &ndash; यातायात व्यवसायीले सबै सिटमा यात्रु राखेर यातायात संचालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले एयरलाइन्सलाई भौतिक दूरी कायम गरेर पूर्ण क्षमतामा जहाज उडाउन पाउने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्। जहाजमा पूरा सिटमा मान्छे राख्न दिएर सरकारले सार्वजिनक बसमा विभेदकारी नीति ल्याएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालको...
आन्तरिक उडानमा एयरलाइन्सहरूले तोके न्यूनतम भाडा,नेपालगञ्ज ४३ सय मै पुग्न सकिने
काठमाडौं &ndash; सात महिनापछि खुल्न लागेको आन्तरिक उडानको भाडादर सुरूवाती दरमा खुलेको छ। एयरलाइन्सहरूले सिमित उडान भोलिदेखि खुलाउने निर्णय गरेसँगै सुरूवाती भाडाबाट उडान खुल्ने भएको छ। सरकारले तोकिदिएको भाडाको तल्लो आधारबाट एयरलाइन्सहरूले भाडादर लिइरहेका छन्। एयरलाइन्सहरूले खुलाएको टिकट बुकिङअनुसार काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुका लागि तल्लो तहको भाडामा टिकट बिक्री भइरहेको छ। सरकारले विभिन्न तहका...
महामारीमा करोडका तक्मा बाँड्ने कि अस्पतालमा बेड थप्ने ?
काठमाडौं &ndash; शनिबार पाँचौँ संविधान दिवस । सधैँझैँ टुँडिखेलमा सैनिक परेडसहित भव्य कार्यक्रम आयोजित थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित बडाहरू आउँदै थिए । पर्खालउता खुलामञ्चमा भने रोजगारी गुमाएका भोका नागरिक भेला हुँदै थिए । उनीहरूका लागि खाना लिएर आउँदै थिए सधैँझैँ स्वयंसेवक । स्वयंसेवक र सर्वसाधारण आश्चर्यमा परे जब प्रहरीले भन्यो&ndash; तपाईंहरू आज यहाँ खाना...
संविधान दिवसको अवसरमा चार्टड फाउन्डेसन नेपालले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th September 2020
काठमाडौ - संविधान दिवसको अवसरमा चार्टड फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना हुने भएको छ। फाउन्डेसनले नेपालको संविधानमा वित्तिय पारदर्शीता सम्बन्धि प्रावधान र चार्टड एकाउन्टेन्टको भुमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताका रुपमा अर्थशास्त्री हरि रोका,राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल तथा करविज्ञ तथा वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेट भवनाथ...
अब मेसीले आफ्नो नाम ट्रेडमार्कको रुपमा दर्ता गर्न पाउने
काठमाडौं &ndash; विश्व फुटबलका स्टार खेलाडी लिओनल मेसीले अब आफ्नो नाम ट्रेडमार्कको रुपमा दर्ता गर्न पाउने भएका छन् । इयुको उच्च अदालतबाट ९ वर्षको लडाइँ जितेपछि मेसीले अब नाम ट्रेडमार्क रुपमा राख्न पाउने भएका हुन् । युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस (युरोपियन न्याय अदालत)ले स्पानिस साइक्लिङ कम्पनी मास्मी र इयुको बौद्धिक सम्पत्ति...
संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले दियो अनलिमिटेड प्याक, कसरी खरिद गर्ने ?
काठमाडौं &ndash; नेपाल टेलिकमले असोस ३ गतेको संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) को अवसरमा अनलिमिटेड युट्युब, अनलिमिटेड फेसबुक लगाएका विभिन्न डेटा प्याक उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले यही असोज २ देखि ४ गतेसम्मका लागि ५५ रुपैयाँमा अनलिमिटेड युट्युब तथा ५५ रुपैयाँमै अनलिमिटेड फेसबुक प्याक खरिद गर्न सकिने जनाएको छ । उक्त...
नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको रंगमा तयार भएको जनकपुर–जयनगर चल्ने रेल जयनगर आइपुग्यो
जनकपुरधाम &ndash; कुर्था&ndash;जनकपुर&ndash;जयनगर चल्ने रेल जयनगर आइपुगेको छ। भारतमा निर्माण भएको रेल बिहीबार साँझ भारतको जयनगर स्टेशनमा आइपुगेको छ। जनकपुर&ndash;जयनगर चल्ने रेल सम्भव भए आज नत्र यस हप्ता भित्र रेल आउने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको रंगमा तयार भएको सो रेल हाल भारतको बिहार स्थित...
बिल गेट्सका बुवाको निधन
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 16th September 2020
एजेन्सी - माइक्रोसफ्ट कम्पनीका सहसंस्थापक बिल गेट्सका बुवाको गत सोमबार निधन भएको छ। अमेरिकी अखबार सिएनएनका अनुसार उनी ९४ वर्षका थिए। बिल गेट्स सिनियर भनेर चिनिने उनको खास नाम विलियम हेनरी गेट्स द्वितीय हो। उनको निधनबारे गेट्स परिवारले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको थियो। बयानमा भनिएअनुसार बिल गेट्स सिनियर अल्जाइमर्स रोगबाट ग्रसित...
नयाँ नक्सा भएको सिक्का निष्कासन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सरकारको स्वीकृति
काठमाडौं &ndash; सरकारले नयाँ नक्सा राखी एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँको सिक्का निष्कासन गर्न राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नक्सासहितको सिक्का निष्कासनको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । नयाँ नक्सा राखेर सिक्का निष्कासन गर्नका केन्द्रीय बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए...
७ वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरे निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं &ndash; ७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले बुधबार पछिल्लो ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभेरेष्ट बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साधारण निक्षेपमा ३...
अर्थमन्त्री रहँदा ओलीको प्यारो बनेका खतिवडा सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 15th September 2020
काठमाडौं - निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई मन्त्रीस्तरीय सेवा सुविधा पाउने गरी खतिवडालाई सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले कार्यकाल सकिएपछि यही भदौ १९ गते राजीनामा दिएका थिए ।...
लोडसेडिङ हटाएर ‘हिरो’ बनेका कुलमानले भने- 'नेपाली जनता मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन'( बिदाइ मन्तव्यको पूर्णपाठ)
काठमाडौं &ndash; नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मंगलवार बिदाइ गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा घिसिङलाई बिदाइ गरिएको हो । प्राधिकरणमा ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले आफूले कार्यकारी निर्देशकका रहँदा प्राधिकरणले हासिल गरेका उपलब्धिका बारेमा चर्चा गरेका थिए । साथै उनले आफूले पूरा गर्न...
मेसी विश्वकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडी,रोनाल्डो र नेमारको कति ?
काठमाडौं &ndash; बार्सिलोनाका फरवार्ड लिओनल मेसी विश्वकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडी बनेका छन् । फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको २०२० को सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडीहरुको सूचीमा मेसी शीर्ष स्थानमा रहेका हुन् । फोर्ब्सका अनुसार मेसीको वार्षिक कमाइ १२६ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । मेसीले युभेन्ट्सका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोभन्दा ९ मिलियन बढी कमाउछन्...
भारतले लगायो प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं &ndash; भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कटिङ्ग गरिएका र पाउडर फार्मलाई छोडेर सबै किसिमका प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । आन्तरिक खपतलाई परिपूर्ति गर्न र बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिन यस्तो कदम चालिएको भारत सरकारले जनाएको छ। हाल दिल्ली लगायतका शहरमा प्याज प्रतिकिलो ३५ देखि ४० भारतीय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको...
रेल्वे कम्पनीले माग्यो १३९ कर्मचारी(सुचना सहित)
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 14th September 2020
काठमाडौं &ndash; सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेल्वे कम्पनीले कूल १३९ जना कर्मचारी माग गरेको छ । निकट भविस्यमा नै जयनगर जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न लागिएको कम्पनीले एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो । सो रेलमार्गमा चल्ने रेल नेपाल नजिक भारतमा आएर बसेको छ । आवश्यक तयारी समेत चलिरहेको छ । कम्पनीले...
रासायनिक मलमा कालोबजारी गर्ने ४ जनालाई जनही १० हजार जरिवाना, मल जफत
चितवन &ndash; जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले रत्ननगर नगरपालिका&ndash;१ बकुलहरमा रहेको निर्मल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले मलमा कालोबजारी गरेको ठहर गरेको छ । प्रशासनले सहकारीका चार जनाले कालोबजारी गरेको भन्दै जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको छ । सहकारीले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ विपरीत...
अन्ततः ओम्नी समूह कालोसूचीमा, एक वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा सामेल हुन नपाउने
काठमाडौं &ndash; कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण आयातको जिम्मा पाई काम गर्न नसकेको ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै औषधि खरिदमा सहभागी ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) लाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो । राजनीतिक रुपमा जोगाउन खोजेको भएपनि संसदीय समितिदेखि आम...
काठमाडौं &ndash; सुनको मूल्य सोमबार बढेको छ। आइतबार ९६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य तोलामा चार सय रुपैयाँले बढेर ९६ हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा चार सय रुपैयाँले बढेर ९६ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार...
ओप्पो ए५३ सार्वजनिक गर्ने तयारी, यस्ता छन् फिचर
काठमाडौं &ndash; ओप्पोले नेपालमा आफ्नो ए सिरिजका फोन्स अन्तर्गत ओप्पो ए५३ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । तीव्र र सहज कार्य प्रदर्शनीका लागि विशेष डिजाइन गरिएको ए५३ले प्रयोगकर्तालाई तीव्र सञ्चार र मनोरञ्जनमा पहुँच बनाउने सहजता प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । ९०एचजेड रिफ्रेश रेटसहितको ओप्पो ए५३ले ९० एचजेड नियो&ndash;डिस्प्लेमार्फत प्रयोगकर्तालाई अद्वितीय र सहज...
प्रतिकोसा एक रुपैयाँमा पनि बिकेन केरा
बारा &ndash; लकडाउनका कारण बजार बन्द हुँदा बाराको निजगढमा उत्पादन भएको केरा बारीमै कुहिएर खेर गएको छ । काठमाडौंसहित पोखरा, नारायणघाट छिमेकी जिल्ला वीरगञ्ज, हेटौडालगायतका बजार बन्द भएपछि निजगढको केरा दस रुपैयाँ दर्जनमा पनि नबिकेको किसानले बताएका छन् । निजगढको केराले मूल्य नपाउँदा पशुको आहारा हुनुका साथै खेतमै झरेर कुहिन थालेको छ...
एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने नेकपाको निर्णय
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th September 2020
काठमाडौं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । के संशोधन गर्ने भन्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने प्रवक्ता नारायणकाजी...
निजी स्कुललाई शुल्क लिने बाटो खुल्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 10th September 2020
काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले &lsquo;विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका&rsquo; जारी गरेको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजी स्कुलहरूले अब निर्देशिका बमोजिम शुल्क लिने बाटो खुला भएको छ। मन्त्रालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै शुल्क लिन पाइने भएको हो। तर शुल्क लिन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि बैंक बन्द,अधिकांश कर्मचारीमा लक्षण देखियो
रौतहट - रौतहटको गरुडा बजारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक जना कर्मचारीमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि बैंक अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। बैंकका शाखा प्रबन्धक घनश्याम कटुवालले एकजना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र अधिकांश कर्मचारीमा लक्षण देखिएकाले सेवा प्रवाह बन्द गरिएको बताए। पहिलेदेखि नै कर्मचारीको ग्राहकसित प्रत्यक्ष भेटघाट नभई सीमित कर्मचारीमार्फत् सेवा...
क्रिकेट खेलाडीहरुले पाए तलब,कुन खेलाडीले कति ?
काठमाडौं - नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सिनियर क्रिकेट खेलाडीको एक वर्षको तलब पठाएको छ । आईसीसीबाट प्राप्त एक वर्षको रकम क्यानले बुधबार खेलाडीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको हो । २२ जना खेलाडी र एक टेक्निकल एनालिस्टसहित २३ जनाको तलब क्यानले पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर क्यानले भने अहिलेसम्म २०१९ को...
रेल मार्ग बनाउने ३२ अर्बको ठेक्का रद्द
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 08th September 2020
काठमाडौं &ndash; रेल मार्ग बनाउने विवादित ३२ अर्बको ५४ वटा ठेक्का रद्द भएको छ। रेल विभागले आइतबार इनरुवा&ndash;काँकडभिट्टा सडकखण्डको रेलमार्गमा (ट्रयाक बेड निर्माण) का लागि आह्वान गरेको ३२ अर्बको ठेक्काका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, महालेखा परिक्षकको कार्यालय र अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरीत जग्गा...
आजदेखी बिहीबारसम्म बैंकका सबै शाखा खुल्ने
काठमाडौं - आजबाट बिहीबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका राजश्व संकलन हुने सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खुला हुने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकहरुलाई राजश्व संकलनका लागि ३ दिन सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खुला गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले भदौ २५ सम्म राजश्व तिरिसक्न करदाताहरुलाई...
राज्यको ढुकुटीबाटै ब्रह्मलुट : चिय-नास्तामै २० अर्ब खर्च
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th September 2020
काठमाडौं - राज्यको ढुकुटीबाट पछिल्लो ३ वर्षमा चियापान, भोजलगायतका नाममा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध शीर्षकबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। तर, विनियोजित बजेटभन्दा ८ सय प्रतिशतसम्म बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ।महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुत्पादक...
कर असुलीमा मात्रै ध्यान दिएका छैनौं,निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि केन्द्रित छौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा फस्न नदिने बताएका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफैंले राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज...
मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द, दुई कम्पनीको धरौटी जफत
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 06th September 2020
काठमाडौं - तोकिएको समयमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानोको मल्टिप्रपोज कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरिएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । &lsquo;तत्कालका लागि सम्झौता रद्द गरिएको छ...
मलका ठेकदारको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्दै सरकार
काठमाडौं - गत पुसमै ठेक्का लिएर भदौ लाग्दासम्म किसानसमक्ष मल नपुर्&zwj;याउने दुईवटा ठेकदार कम्पनीको ५/५ करोड रुपैयाँ धरौटी सरकारले जफत गर्ने भएको छ । यी दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि समेत कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने भएको छ । आइतबार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको बैठक बसेर दुवै ठेकेदारको धरौटी जफत गर्न लागेको...
कुखुराको मासु प्रतिकिलो २०० मात्रै
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 05th September 2020
चितवन &ndash; तीन हप्तादेखि जारी निषेधाज्ञाले फार्ममा तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा बजारसम्म नपुग्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको छ । पोल्ट्रीको राजधानीका रुपमा परिचित चितवनबाट बाहिरी जिल्लासम्म कुखुरा निर्यात गर्न नसक्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको हो । एक हप्ताअघि प्रतिकेजी खुद्रा रु ४२० रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले रु २०० पुगेको छ। कोरोना भाइरसको...
बिल गेट्स भन्छन्-' कोरोना महामारी अझै डेढ वर्ष रहन्छ,महामारी अन्त्य हुँदासम्म गरिब मुलुकका लाखौंको मृत्यु भइसक्छ'
एनेन्सी - कोभिड&ndash;१९ महामारी सन् २०२१ को अन्त्यसम्म रहनेछ। र यो थामिनुअघि थप दसौं लाख मानिसको ज्यान जानेछ। यो भनाइ विश्वकै अग्रणी सफ्टवेयर उत्पादक माइक्रोसफ्टका मुख्य हस्ती बिल गेट्सको हो। उनी बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन का तर्फबाट गरिने सहयोगका आधारमा विश्वकै सर्वोच्च परोपकारीमध्येमा पनि गणना गरिन्छन्। दि इकोनोमिस्ट पत्रिकाका प्रधान सम्पादक...
बिमा कम्पनीहरुको चलाखी : ७५ करोड उठाएपछि संक्रमितलाई बीमा दावी भुक्तानीमा नयाँ शर्त
काठमाडौं - नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण पुष्टि हुँदा समेत बीमा कम्पनीहरूले बीमा भुक्तानी दिन आनकानी गरेका छन् । सबै प्रक्रिया पुर्&zwj;याएर बीमाका लागि आवेदन दिएका मध्ये २५ प्रतिशतले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । बिहीबारसम्म एक हजार ४६७ जनाले बीमा भुक्तानी माग गरेका छन् । उनीहरूमध्ये जम्मा २३९ जनाले मात्रै...
अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए राजीनामा,आफुले बसालेको जगलाई निरन्तरता दिन आग्रह
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 04th September 2020
काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्&zwj;मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएकी छन् । शुक्रबार अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय संसद सदस्य...
आगामी साताभित्रै मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीमा कसलाई ल्याउलान भन्ने सर्वत्र चासो
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साताभित्रै आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न सकिने बाटो खोलिदिएको छ । दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले अन्य नेतासँगको पनि परामर्शमा स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि नै मन्त्रिपरिषद...
सुनको मुल्य घट्यो,आज कतिमा कारोबार हुँदै ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 03rd September 2020
काठमाडौं&nbsp; -नेपाली बजारमा आज पहेलो धातु सुनको मूल्यमा प्रतितोला रु ७०० ले कमी आएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आज बुधबारको तुलनामा रु ७०० ले कमी आई रु ९६ हजार ५०० मा कारोवार भएको छ । बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ९७ हजार २०० मा कारोवार...
बास्कोटाले मन्त्रीबाट हात धुनु परेको ७० करोड कमिसन काण्ड : ७ दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुन मिश्रलाई निर्देशन
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 02nd September 2020
काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विजय प्रकाश मिश्रलाई सात दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाई गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारले मिश्रलाई बोलाएको हो । अख्तियारले बुधबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा कमिसन मोलमोलाइको विषयमा केही बुझ्नुपर्ने भएकाले मिश्रलाई उपस्थित हुन...
दशैंका लागी नयाँ नोट वितरण गर्ने/नगर्ने कुनै निर्णय भएको छैन : राष्ट्र बैंक
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 01st September 2020
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने/नगर्ने कुनै निर्णय भइनसकेको बताएको छ । दशैं आउन अझै समय बाँकी रहेकाले यो महिना कुनैपनि निर्णय नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवति नेपालले नयाँ नोटका विषयमा अर्को महिनामात्रै निर्णय हुने बताए ।...
५ लाख बोकेर भौतिक मन्त्रालय आएका बाँकेका कार्यालय प्रमुख पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 31st August 2020
बुटवल - पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख मनिष कुमार अर्याल मन्त्रालयभित्रैबाट श्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ परेका छन्। गोप्य सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको टोलीले उनलाई ५ लाख ३० हजार रुपैयाँसहित बुटवल स्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय परिसरबाट पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले...
प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासिला मन्त्रीका रुपमा रहेका खतिवडा दोहोरिने सम्भावना प्रवल
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासिला मन्त्रीका रूपमा रहेका युवराज खतिवडा दोहोरिन्छन् या नयाँ व्यक्ति आउँछन् भन्नेबारे नेकपा वृत्तमा विभिन्न कोणबाट छलफल सुरु भएको छ । खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै र ओली समूहकै पनि एउटा खेमा र पार्टीबाहिर समेत आलोचना भइरहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउँछन् भन्ने नेकपाकै एकाथरी नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री...
भक्तपुरमा नबिकेपछि सडकमा फ्याँकियो दूध
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th August 2020
काठमाडौं - निषेधाज्ञाका कारण बिक्री नभएपछि भक्तपुरको सूर्यबिनायकमा दूध सडकमा फ्याँकिएको छ । सूर्यबिनायक नगरपालिका ८ सूर्यविनायक चोकमा रहेको रानीकोट डेरीका सञ्चालकले बिक्री नभए पछि सडकमा दूध फ्याँकेका हुन् । किसानबाट संकलन गरेको दूध बिक्री ठप्प भएपछि शुभमाया श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको डेरीले सडकमा खन्याइदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव...
कुखुराको मासु प्रतिकेजी २४० रुपैयाँ, किन लाग्यो यसरी मुल्य ओरालो ?
काठमाडौँ &ndash; काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि प्रशासनले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागु गरेको निषेधाज्ञाका कारण ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य ओरोलो लागेको छ। नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले सरकारले गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण कुखुराको मासुको मूल्य ओरालो लागेको जानकारी दिए। लकडाउन र...
उद्योगी विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 28th August 2020
काठमाडौं - उद्योगी एव्म सांसद विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आफूलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार बिहान आएको कोरोना परीक्षणको रिजल्टमा आफ्नो रिजल्ट पोेजेटिभ देखिएको उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत जानकारी गराएका हुन्&nbsp;।...
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट,आज कतिमा कारोबार हुँदै ?
काठमाडौं &ndash; नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला ९७ हजार ६ सय रूपैयाँ कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला...
आवको पहिलो महिनामै साढे ४ अर्बको मोबाइल फोन आयात
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 27th August 2020
काठमाडौं- गत साउन महिनामा करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँको मोवाइल फोन आयात भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी रहेकै बेला बिलासी विद्युतीय सामग्री मोबाइल धेरै आयात हुँदा औषधिको आयात भने न्युन रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । साउन महिनामा ४ लाख ७० हजार ६२१ सेट मोबाइल सेट भन्सार पास भएको थियो ।...
नेप्सेमा २१ अंकको वृद्धि
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 26th August 2020
काठमाडौँ &ndash; धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उल्लेख्य अंकले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २१.१० अंकले बढेर एक हजार ४६२.०३ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ४.७७ ले वृद्धि भई २९८.७४ मा पुगेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन काठमाडौँ उपत्यकाका...
११ सय वर्ष पुरानो सुनका सिक्का फेला
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 25th August 2020
एजेन्सी - पुरातात्विक क्षेत्रमा स्वयम सेवा गरिरहेका युवाले इजरायलको मध्य क्षेत्रमा ११ सय वर्ष पुरानो सुनका सिक्का फेला पारेका छन्। पुरातात्विक क्षेत्रमा खोजीमा खटिएका युवाले माटोको भाँडोमा राखी गाडिएको ११ सय वर्ष पुरानो ४२५ वटा सुनका सिक्का भेट्टाएका हुन् । अधिकांश सिक्कामा रहेको मिति इस्लामिक समयको प्रारम्भिक काल छ। ती सिक्काहरुको तौल...
बिहानै कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजारको छड्के अनुगमनमा पुगे आपूर्तिमन्त्री भट्ट
काठमाडौं - उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट्ले बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारको भिड व्यवस्थित नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार बिहान कालीमाटी र बल्खु फलफूल तथा तरकारी बजारको छड्के अनुगमन गर्दै मन्त्री भट्टले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । बजारमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बढेको, सामाजिक दूरी कायम नभएको...
तरकारी तथा फलफूलको होलसेल बजार राति १२ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म खुल्ने
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 21st August 2020
काठमाडौं - कालिमाटी, बल्खु, कुलेश्वरसहितका तरकारी तथा फलफूलको होलसेल बजार राति १२ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म मात्रै खुल्ने भएको छ । निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहीबार ती बजार राति १२ बजेदेखि बिहान ७ बजसम्म मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो । किसानले बजारसम्म ल्याएको तरकारी निषेधाज्ञाकै कारण बिक्न छाडेपछि बजार खुल्ने समयअवधि बढाउन व्यवसायीले...
विदेशबाट उद्धारका लागि तय भइसकेका चार्टर्ड उडान अनिश्चितकालका लागि स्थगित
काठमाडौं &ndash; सरकारले कामदारको उद्धारका लागि तय भइसकेका चार्टर्ड उडान स्थगित गरेको छ । कोभिड&ndash;१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार उडानहरु स्थगित गर्न पत्र लेखेको छ । त्यसकै आधारमा सरकारले चार्टर्ड उडान स्थगन गरेको हो । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ३ सय...
चार वर्षअघि ३४ अर्ब घाटामा रहेको विद्यु प्राधिकरण कुलमानको इन्ट्रीसँगै अहिले ४ अर्ब सञ्चित नाफामा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 17th August 2020
काठमाडौं &ndash; आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपाल विद्यु प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ८ अर्ब ८९ करोड थियो। त्यही वर्ष कूल नोक्सानी ३४ अर्ब ६० करोड पुगेको थियो। बितेका चार वर्षमा प्राधिकरणको यो वित्तीय आँकडा पुरै परिवर्तन भएको छ। गएको वर्ष प्राधिकरण सञ्चित नाफामा गएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गएको वर्ष ११ अर्ब...
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट,आज कतिमा कारोबार ?
काठमाडौं &ndash; नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। आइतबारको तुलनामा (सोमबार) तोलामा २ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुन तोलाको ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मुल्य पनि तोलामा २ सय रुपैयाँले नै घटेर ९७ हजार ७ सयमा कारोबार...
काठमाडौं उपत्यकाका यी स्थानमा पाइन्छन् १ करोड भन्दा कम मुल्यमा घर
काठमाडौं &ndash; तपाईं ऋणपान गरेर १ करोड रुपैयाँ जुटाएर काठमाडौं उपत्यकामा घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि खुसीको खबर छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै १ करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा घर पाउन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा कोरोनोको प्रभाव बढ्दै गएपछि कम मूल्यमा घर पाइन थालेको हो ।पछिल्ला दिनमा केही पैसा...
इपान अध्यक्षमा आचार्य सर्वसम्मत चयन
काठमाडौं &ndash; स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) को अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद आचार्य सर्वसम्मत चयन भएका छन् । आइतबार साँझ अबेर सम्पन्न इपानको भेलाले आचार्यलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो । वाम र प्रजातान्त्रिक प्यानलबीच निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने रस्साकस्सीका बीच इपानमा आचार्यका नाममा सर्वसम्मति जुटेको हो । बिन्दवासिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष...
काठमाडौं &ndash; नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी मूल्य बढाइएको निगमले जनाएको छ। ती पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँका दरले बढेको हो। निगमका अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ पुगेको छ भने, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ९१ रुपैयाँ...
जगदम्बाका रड प्रयोग भएका संरचनाहरु उच्च जोखिममा [ भिडियो रिपोर्ट सहित ]
साउन ३०, काठमाडौँ । जगदम्बा स्टिल्स् कम्पनीबाट उत्पादित निर्माणजन्य बस्तुहरु कमजोर र गुणस्तरहिन भएको फेला परेको छ । काठमाडौँको नागार्जुनमा निर्माण भईरहेको एक घरमा प्रयोग गरिएका रडहरु सजिलै भाँचिने र नासिने भएको भन्दै घरधनी र जगदम्बाका रड प्रयोग गरिएका उपभोक्ताहरु त्रसित छन् । निर्माणाधीन रहेको श्रीकृष्ण भट्टराईको घरमा प्रयोग भएको जगदम्बा...
न्यूरोडका एक व्यापारीमा कोरोना देखिएपछि विशालबजार क्षेत्र बन्द
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंको न्यूरोड क्षेत्रमा एक व्यापारीमा कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) संक्रमण देखिएपछि पसलहरु बन्द गरिएको छ। व्यापारीमा संक्रमण देखिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २४ मा पर्ने क्षेत्र न्यूरोडको विशालबजार देखि इन्द्रचोकसम्मका पसलहरु बन्द गरिएको हो। शुक्रबारबाट लागु हुने गरी भदौ ७ गतेसम्म त्यसक्षेत्रका सबै पसलहरु बन्द गर्न वडा कार्यालय अनुरोध गरेको छ। वडा...
आज पनि बढ्यो सुनको भाउ , कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं &ndash; सुनको मूल्य शुक्रबार पनि बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढेर ९८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ९७ हजार ८ सय रुपेयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा पनि ८ सय रुपैयाँले बढेर ९८...
हिजो ठुलो अन्तरले घटेको सुनको मुल्य आज तोलामै २ हजार ४ सयले बढ्यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 13th August 2020
काठमाडौं &ndash; बुधबार ठूलो अन्तरले घटेको सुनको भाउ बिहीबार पुनः बढेको छ । प्रतितोला दुई हजार चार सय रुपैयाँले सुनको भाउ बढेको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आजकालागि महासंघले सुनको प्रतितोला कारोबार मूल्य ९७ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै तेजावी सुनको प्रतितोला कारोबार मूल्य ९७ हजार...
सामसङ ग्यालेक्सी नोट २० र नोट २०अल्ट्राको प्रि–बूकिङ्ग खुला, यस्तो छ मूल्य र फिचर
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 12th August 2020
काठमाडौं । सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी नोट ट्वान्टी र नोट ट्वान्टी अल्ट्राको प्रि&ndash;बूकिङ खुल्ला गरेको छ । हालै विश्वबजारमा सार्वजनिक गरिएको कम्पनीको फ्ल्यागशिप सिरिजका स्मार्टफोनको बूकिङसँगै आकर्षक अफरहरु पनि समावेश गरिएको छ । ग्यालेक्सी नोट ट्वान्टी सिरिज मोबाइलहरुले कम्प्युटरको जस्तै कार्य गर्न सक्दछन् र यसमा प्रो&ndash;गेमहरु सहजै खेल्न सकिन्छ । यो फोन...
सुनको भाउमा एकै दिन पहिलो पटक भारी गिरावट
काठमाडौं । सुनको भाउ एकै दिन भारी मूल्यले घटेको छ । मंगलबारको तुलनामा तोलामै ६ हजार २ सय रुपैयाँले सुनको भाउ घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला एक लाख एक हजार ६ सय थियो । तर बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला ९५ हजार...
२१ वर्षमै अरबपति बनेकी यी मोडल
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th August 2020
एजेन्सी &ndash; विश्वमा नै चर्चित &lsquo;मिडिया पर्सनालिटी&rsquo; काईली जेनरले आज जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । उनी हाल २३ वर्षकी भइन् । उनी आफ्नी दुई वर्षीया छोरीसँग जन्मोत्सब मनाइरहेकी छिन् । उनले जन्मदिनको अवसरमा पहिरिएको पहिरनमा २३ लेखिएको छ । काईली मिडिया पर्सनालिटीका साथसाथै चर्चित एन्टरप्रेन्योर पनि हुन् । रियालीटी टेलिभिजन स्टार, मोडल...
खानेपानी संस्थान बुटवलका कार्यालय प्रमुख साह घुससहित पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 10th August 2020
काठमाडौं &ndash; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नेपाल खानेपानी संस्थान बुटवलका कार्यालय प्रमुख सन्तोष साहलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले इन्जिनियर साहलाई धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिका&ndash;८ खानीखोलाबाट आइतबार पक्राउ गरेको हो । उनको साथबाट स्रोत नखुलेको २ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ नगद र बैंकमा...
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट,आज कति घट्यो ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 09th August 2020
काठमाडौं &ndash; साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। गत शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आइतबार ९ सय रुपैयाँ सस्तो भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख २ हजार ६ सय रुपैयाँ तथा...
भारततर्फ लैजाँदै गरेको २२ तोला सुनसहित एक पक्राउ
मोरङ&ndash; विराटनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको विओपी पोष्ट बखरीले भारततर्फ लैजाँदै गरेको २३ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सुन बरामद गरेको छ। शनिबार गस्तीका क्रममा बखरी पोष्टले भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा २ सय ६७ ग्राम(२२.८९ तोला) सुनसहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी मोरङका प्रमुख एसपी तीर्थ पौडेलका अनुसार विराटनगर १६ को दरैया...
नबिल बैंक लिमिटेडको डेपुटी सीईओमा सुजित शाक्य नियुक्त
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th August 2020
काठमाडौं - सुजित शाक्य नबिल बैंक लिमिटेडको डेपुटी सीईओमा नियुक्त भएका छन् । यस अगाडि ग्लोबल आईएमई बैंकमा कार्यरत उनी तत्कालीन जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्ज भएपछि त्यही कार्यरत रहेका थिए । नबिल बैंकका सीईओ अनिल केसरी शाहले सुजित शाक्यलाई नयाँ डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको जानकारी दिए । डेपुटी प्रमुख कार्यकारी...
सरकारी रकम श्रीमती र भतिजको खातामा राख्ने लेखापालसहित ४ जना पक्राउ
रुकुम पश्चिम &ndash; सरकारी रकम आफ्नो, श्रीमती र भतिजाको खातामा जम्मा गर्ने एक गाउँपालिकाका लेखापालसहित चार जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा त्रिवेणी गाउँपालिकाका लेखापाल हेमन्त केसी, लेखा सहयोगी तथा लेखापालका सहोदर भतिजा सुवास केसी, भाइ विकास र अर्का भतिजा भीमसेन रहेका छन्। बाहिरबाट ताला लगाई अनावश्यकरूपमा कागजात मिलाउँदै गरेको जानकारी पाएपछि...
सुनको भाउ तोलाकै एक लाख नाघ्यो
काठमाडौं &ndash; बिहीबार सुनको मूल्य एकैदिन ११ सयले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। बुधबार एक लाख एक हजार चार सयमा कारोबार भएको सुन आज एक लाख २ हजार ५ सयमा पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको हो। यसअघि सुनको मुल्यले बुधबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। पछिल्लो समय सुन अनपेक्षित रूपले बढ्दै...
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख विजय राना २ लाख घुस सहित पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 04th August 2020
काठमाडौं &ndash; राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख विजय राना अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । रानालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलले २ लाख नगद रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो । बुटवल नयाँगाउँस्थित कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख रानाले कपिलबस्तु कृष्ण नगरका व्यापारी अनिल कुमार झासगँ घुस वापतको रकम लेनदेन गर्दैगर्दा कार्यलय नजिकको बुद्धचोकबाट...
सुनको भाउ आजपनि बढ्यो,प्रतितोला झण्डै १ लाखमा कारोवार
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ तोलामै एक लाख रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज ३ सय रुपैयाँले बढेर छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार छापावाल सुनको भाउ ९९ हजार तीन सय रुपैयाँ थियो । महासंघले आइतबारका लागि...
काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । शनिबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी डिजेल,पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर दुई दुई रुपैयाँले मूल्य बढाईएको निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्ययले जानकारी दिए । नयाँ मूल्यवृद्धिपछि डिजेल र मट्टीतेल र पेट्रोलको काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिलिटर मूल्य क्रमश ९० र १ सय ४...
काठमाडौंमा एक प्रहरी जवानको कोठाबाट सुन जस्तै देखिने एक किलो पहेँलो धातु बरामद
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंमा एक जना प्रहरी जवानको कोठाबाट सुन जस्तै देखिने एक किलो पहेँलो धातु बरामद भएको छ। साढे १४ किलो चाँदी र आधा किलो सुन प्रकरणमा गलत सूचना दिएको अभियोग लागेका सादा पोशाकका प्रहरी जवान प्रसन्न श्रेष्ठको कोठामा छापा हान्दा सुन जस्तो देखिने एक किलो धातु बरामद भएको प्रहरी श्रोतले...
कमलादी सुन प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट : 'गाडीबाट सुन फ्याकिएको होइन,जवानको हातमा दिइएको थियो'
काठमाडौं - आधा किलो सुन र साढे १४ किलो चाँदी बरामद प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गको टोलीले पछ्याउँदै गएपछि गाडीबाट सुन फ्याकेको नभई प्रहरी जवानको हातमा दिएको पाइएको छ । दरबारमार्ग प्रहरी प्रमुख डीएसपी रञ्जनकुमार दाहाललाई समेत गलत सूचना दिएर प्रहरी जवान बहादुरसिंह कडायतले सुन्धारामा सुन...
ऋण तिर्न नसकेपछि आफू अपहरणमा परेको सूचना प्रहरीलाई दिएपछि...
सिन्धुपाल्चोक &ndash; अज्ञात व्यक्तिले अपहरण गरेको भनेर झुक्याउनेलाई १८ घण्टापछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाह्रबिसे नगरपालिका&ndash;४ का जीवन खत्री रहेका छन्। ऋण तिर्न नसकेपछि उनले आफू अपहरणमा परेको सूचना प्रहरीलाई दिएका थिए। अपहरणमा परेको खबर आएपछि प्रहरी परिचालन गरिएको र जाँचबुझका क्रममा उनी अपहरणमा नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको...
सुनको पोका फ्याँकेको स्कोर्पियो नख्खिपोटमा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th July 2020
काठमाडौँ - केही दिनअघि काठमाडौँको कमलपोखरीमा गाडीबाटै सुन फ्याँकेर भागेको स्कोर्पियो ललितपुरको नख्खीपोटमा भेटिएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले बिहीबार उक्त बा ६ च ५५१९ नम्बरको सिल्भर कलरको स्कोर्पियो गाडी भेटेको हो। उक्त स्कोर्पियोबाट १५ केजी पहेँलो धातु र २ वटा पेस्तोल फ्याँकेपछि प्रहरीले पिछा गरे पनि फेला पार्न सकेको थिएन।...
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड,तोलाको झण्डै १ लाख
काठमाडौं &ndash; बिहीबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । पछिल्लो दिनहरुमा सुनको मूल्य लगातार बढ्दै नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै आएको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बुधबार प्रतितोला ९८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार...
सुनको मूल्य आज पनि बढ्यो,तोलामा कति पुग्यो ?
काठमाडौं &ndash; सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ। बुधबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा तीन सय रुपैयाँले बढेर ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ९८ हजार दुई सय रुपैयाँ थियो। तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा तीन सय पाँच...
सोलुखुम्बु - जिल्लाको सोताङबाट १४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी नगदसहित चार जुवाडेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय सोताङका प्रहरी निरीक्षक अनिल लिम्बूको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले जुवा खेलिरहेको अवस्था उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सोताङ गाउँपालिका&ndash;५ शिवटार बजार नजिकैको पसलघरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १४ लाख ६५ हजार रूपैयाँ...
लगातार उकालो लाग्दै सुनको भाउ,आज तोलाको ९८ हजार २ सयमा कारोबार
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउले मंगलबार पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । लगातार उकालो लागिरेको सुनको मूल्य आज तोलाको ९८ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार सुन तोलाको ९७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार तोलामा ७ सय रुपैयाँ बढेको छ...
काठमाडौं - काठमाडौंको कमलादीबाट १५ किलो सुन बरामद भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले अवैध रुपमा भित्र्याइएको सुन बरामद गरेको हो ।...
सुजुकीको १५०० सीसी पेट्रोल इन्जिनयुक्त नयाँ भिटारा ब्रेजा नेपाली बजारमा, के-के छन् फिचरहरु ?
काठमाडौं - नेपालका लागि सुजुकी ब्रान्डका कारको आधिकारिक विक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्सको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपाली बजारमा नयाँ पावरफुल र स्टाइलिस भिटारा ब्रेजा सार्वजनिक गरेको छ । स्पोर्टी र बोल्ड लुक्सबाट सज्जित सुजुकीको नयाँ कम्प्याक्ट एसयुभीमा प्रिमियम इन्टेरियरका साथै &lsquo;फस्ट&ndash;इन&ndash;क्लास&rsquo; फिचरहरु रहेका छन् । १४६२ सीसीको &lsquo;के&ndash;सिरिज&rsquo; बीएस६ पेट्रोल इन्जिन जडित...
अन्नतः सधैँको लागि बन्द भयो श्रीराम सुगर मिल्स
काठमाडौं - श्रीराम सुगर मिल्स सधैँका लागि बन्द भएको छ । मिलले औपचारिक रुपमै सधैँको लागि बन्द भएको घोषणा गरेको हो । मिलको सञ्चालक समितिले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ घाटा देखाएर बन्द गरेको छ । कम्पनीको जर्जर आर्थिक अवस्था र पुँजीको अभावको कारण कम्पनी व्यवस्थापन पक्षले विगत चार महिनादेखि उद्योगमा...
सुनको मूल्य इतिहासकै उच्च
काठमाडौँ । आज सोमबार सुन चाँदीको मूल्यले इतिहास रचेको छ । आइतबार ९६ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा १२ सय रुपैयाँले बढेर ९७ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलामा १२ सय रुपैयाँले नै बढेर ९७ हजार ६० रुपैयाँ पुगेको छ...
अमेरिका–चीन सम्बन्ध थप उत्कर्षमा : चीन छोड्दै अमेरिकी वाणिज्य दूतावास
एजेन्सी&nbsp; - चीनको दक्षिण&ndash; पश्चिमी शहर चेङ्गदूमा रहेको अमेरिका वाणिज्य दूतावासका कूटनीतिज्ञहरुले चीन छोड्दै छन् । चीनले चेङ्गदूमा रहेका अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश दिएकाले त्यहाँका कूटनीतिज्ञ त्यहाँबाट बाहिरिने तयारी गरेका हुन् । चीनले सो वाणिज्य दूतावास बन्द गर्नका लागि सोमबारसम्मको समय दिएको थियो । चेङ्गदू वाणिज्य दूतावासका कर्मचारीहरुले बक्स,...
पैसा लिएर सामान डेलिभर नगर्ने साबिज कुरियरका प्रतिनिधि पक्राउ
काठमाडौं&nbsp; - पैसा लिएर कुरियर डेलिभर नगरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा साबिज कुरियर सर्भिसका धिरज शाह छन् । उनलाई प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखा, बानेश्वरले जनकपुरबाट पक्राउ गरेको हो । भारतीय कम्पनीबाट अनलाइनमार्फत नेपालमा सामान डेलिभर गर्ने शाहले बताएका थिए । उनले आफूलाई कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा...
काठमाडौँ । आज सुन चाँदीको मूल्यले इतिहास रचेको छ । शुक्रबार ९५ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेर ९६ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलामा ४९५ रुपैयाँले बढेर ९५ हजार ८६० रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदी पनि आज आइतबार...
चितवन । हात्तीले जुम्ल्याहा सन्तान जन्माउनुलाई विश्वमा निकै दुर्लभ घटना मान्ने गरिएको छ । गर्भाधान भएको १८ महिनामा बच्चा जन्माउने हात्तीले प्रायःजसो एक छावा मात्रै जन्माउछ । तर, झण्डै १२ वर्षअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन केन्द्रमा पालिएको देवीकलीले एकै बेतमा पाएकी थिई राम लक्ष्मणलाई । चितवनमा २०४२ सालमा स्थापना गरिएको प्रजनन...
सुनको मूल्य ऐतिहासिक रेकर्ड
काठमाडौं । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९५ हजार ८ सयमा पुगेर हालसम्मकै उच्च रेकर्ड राखेको छ । बिहीबार ९४ हजार ५ सयमा कारोबार भएको सुन एकैदिन १३ सयले बढेर ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको हो । आज चाँदीको मूल्य पनि ५ रुपैयाँले बढेर ११ सय ५० रुपैयाँमा कायम छ । अघिल्लो दिन चाँदीको...
अब एक हजारको नोटमा नेपालमै जन्मिएको जुम्ल्याहा हात्तीको फोटो ‘राम–लक्ष्मण’
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 23rd July 2020
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारदेखि बजारमा ल्याएको एक हजार रुपैयाँको नयाँ नोटमा नेपालमै जन्मिएको जुम्ल्याहा हात्तीको फोटो राखिएको छ । अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको अफ्रिकन हात्तीको फोटो हटेको छ । हजारको नोटमा नेपाली हात्तीको फोटो राख्ने निर्णय राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सालमै गरेको भए पनि बुधबारदेखि मात्रै नेपाली हात्तीको...
सुनको मूल्यमा अर्को नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । सुनको मूल्यमा बिहीबार पुनः नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ ९४ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तेजाबी सुनको मूल्य भने ९४ हजार ६५ रुपैयाँ प्रतितोला तोकेको छ । चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा...
अब ‘आइफोन एसई २०२०’ नेपाली बजारमा पनि
काठमाडौं &ndash; नेपालका लागि एप्पलको आधिकारिक वितरक जेनरेशन नेक्स्ट कम्यूनिकेसन प्रा.लि.ले &lsquo;आइफोन एसई २०२०&rsquo; नेपाली बजारमा ल्याएको छ। कम्पनीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आधिकारिक रुपमा नेपाली बजारमा आइफोन एसई २०२० खरिद गर्न सकिने जानकारी दिएको छ। कम्पनीले ६४ जीबी आइफोनको मूल्य ७० हजार, १२८ जीबीको ७५ हजार र २५६ जीबीको ९६ हजार...
सुनचाँदी भाउ अहिलेसम्मकै उच्च
काठमाडौँ । आज (बुधबार) सुन चाँदीको मूल्यले ईतिहास रचेको छ । मंगलबार ९२ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा १३ सय रुपैयाँले बढेर ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलामा १३ सय रुपैयाँले नै बढेर ९३ हजार ५६० रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदी...
साउन १५ बाट होटल संचालन गर्न दिने सरकारको निर्णय
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 21st July 2020
काठमाडौं - साउन १५ गतेबाट होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा होटल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । हाल होटलहरु बन्द नै छन् भने रेष्टुरेन्टहरुमा प्याकिङ र टेक अवे सेवा मात्र दिने अनुमाति छ । साउन १५ बाट भने होटल पनि खुल्ने भएका छन्...
१५ अंकले घट्यो नेप्से
काठमाडौं - धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झण्डै १५ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से १४.९९ ले घटेर एक हजार ४४९.९४ अंकमा रोकिएको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक २.५६ अंकले घटेर ३०७.०५ मा पुगेको छ । आज कुल १८५ कम्पनीको ४९ लाख ७६ हजार ४८८ कित्ता...
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई आधारभूत रकम उपलब्ध गराउने हान र मजदुरसंठनबीच सहमति
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 17th July 2020
काठमाडौं - होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुले तलबमा केही राहत पाउने भएका छन् । कोरोना तथा लकडाउनले चौपट भएका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकलाई होटलले भुक्तानी गर्नु पर्ने कूल आधारभूत रकम तय गरेर उपलब्ध गराउने भएका हुन । व्यसायीहरुले आफ्ना श्रमिहरुलाई बन्दाबन्दी समयको समेत केही रकम उपलब्ध...
कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थपियो
काठमाडौं&nbsp; - राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थपिएको जानकारी दिए । कोभिड-१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण...
काठमाडौं - सुनचाँदीको भाउ आज घटेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा ५ सय रुपैयाँ घटेर तोलाको ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको भाउ १२ डलरले घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै भाउ घटेपछि नेपालमा पनि केही सस्तो भएको...
बिल गेट्सलगायत विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरुको ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 16th July 2020
काठमाडौं - बिल गेट्सलगायत विश्वकै धनाढ्य व्यक्तिहरुको ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक भएको छ । अरबपति व्यापारी बिल गेट्स, एलन् मस्क, जेफ बेजोसलगायतको ट्वीटर अकाउन्ट बिटक्वाइनको नामबाट ह्याक भएको छ । ह्याक गरिएका अकाउन्टहरुमा रकम माग गर्दै, त्यसको दोब्बर पैसा फिर्ता दिने उल्लेख छ । बिल गेट्सको अकाउन्टमा लेखिएको छ, &lsquo;जसले पनि मलाई समाजमा...
यस्तो छ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं - महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ पेश गरेको छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९१० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७५,०७६ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण...
भोलीदेखि एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा चार्ज लाग्ने
काठमाडौं - बिहीबारदेखि एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएम मेसिनमा प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले साउन १ गतेदेखि बैंकहरुले नै यो शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। साउन १ देखि एक बैंकको कार्ड र अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कबारे बैंकहरुले नै निर्णय गर्ने एसोसिएसनका प्रमुख...
पठाओका सहसंस्थापक फहिम शरीर काटिएको अवस्थामा मृत फेला
एजेन्सी - राइड शेयरिङ कम्पनी पठाओका सह संस्थापक फहिम सलेह अमेरिकामा मृत भेटिएका छन् । सलेहको शरीर काटिएको र छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा शव फेला परेको बताइएको छ । ३३ वर्षीय सलेह एक वर्ष अगाडी न्युयोर्कको अपोर्टमेन्टमा सरेका थिए । उनको घरको सीसीटीभी फुटेजमा उनी लिफ्टमा प्रवेश गर्दा उनीसँगै मास्क लगाएको मानिस देखिएको...
पोलिमर नोट प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगभर्नर रावलसहित तीनै जनालाई अदालतको सफाइ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 14th July 2020
काठमाडौं - विशेष अदालतले पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीनै जनालाई सफाइ दिएको छ। झन्डै २० वर्षअघि १० रूपैयाँका पोलिमर नोट छाप्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै डेढ वर्षअघि अख्तियारले पूर्वगभर्नर रावल, नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेसरी पौड्याल र अस्ट्रेलियाको मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। मंगलबार...
काठमाडौं &ndash; धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज ५.०४ अङ्कले उकालो लागेर एक हजार ३४७.४४ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.९५ ले वृद्धि भई २४८.१८ मा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कुल १८६ कम्पनीका २५ लाख ६८ हजार १२४ कित्ता शेयर रु ९९ करोड ४५...
स्वीस बैंकमा प्रधानमन्त्री ओलीको ५५ लाख डलर रहेको खुलासा ,५ लाख अमेरिकी डलर वर्षेनी थपिँदै
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्विट्जरल्यान्डस्थित स्वीस बैंक खातामा करोडौं रकम जम्मा रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ग्लोबल वाच एनलाइसिसले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो रकम चीनले दिएको उल्लेख गरिएको छ । चीनले बेलाबखत रकम दिन थालेकोले प्रधानमन्त्रीको सम्पति बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ...
फेरी बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 13th July 2020
काठमाडौं - नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ९२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ९२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै, तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ८६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तैगरी, चाँदी पनि रु १०...
काठमाडौं - साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । शुक्रबार ९२ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार रु १०० ले घटेर तोलामा ९२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ६६० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th July 2020
काठमाडौं - यूएईमा पक्राउ परेका ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका एक आरोपीलाई नेपाल ल्याइएको छ । इन्टरपोलमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएपछि यूएईमा समातिएका हरिशरण खड्कालाई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर शनिबार काठमाडौं ल्याइएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रामकृपाल साहका अनुसार उनलाई काठमाडौं उत्रिएपछि गौशाला प्रहरीको जिम्मा लगाइएको...
काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । सरकारले असार १६ गते पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो । १० दिनकै बीचमा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ६ र डिजेलमा ३ रुपैयाँले बढेको छ । अब पेट्रोलको मूल्य...
आज सुनको मूल्यले कायम गर्यो नयाँ रेकर्ड, तोलामा कति पुग्यो?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 09th July 2020
काठमाडौं - बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ४ सय पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। सोमबार ९१ हजार ५ सयमा कारोबार भएको सुन एकैदिन ९ सयले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंस १८ सय १२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य...
किस्ता तिर्न नसकेपछि यातायात व्यवसायीले बुझाए बैंकलाई १५५ गाडीको चाबी
काठमाडौं - कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन १०० दिनभन्दा बढी पुग्दासमेत सार्वजनिक यातायात ठप्प छ । पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन अलि खुकुलो भएर निजी सवारी तथा उद्योग, पसल व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि सार्वजनिक यातायात बन्द छन् । ऋण लिएर गाडी सञ्चालन गरेका यातायात व्यवसायी अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा समेत...
बुधबार सुनकाे मूल्य बढ्याे
असार । बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँ बढेको छ । मंगलबार ९० हजार ९०० मा कारोबार भएको सुन बुधबार ९१ हजार ५०० मा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी सुन भने तोलाको ९१ हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । मंगलबार तोलाको ९५० मा कारोबार भएको...
असारमै ऋण चुक्ता गरे ९.९९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिने
काठमाडौं । एनआइशी एशिया बैंकले असार मसान्तसम्म ऋण तिर्नेलाई ९.९९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिने भएको छ । बैंकले सिमित समय तोकेर ऋणिहरुका लागि यस्तो सुविधा दिने भएको हो । अब योसुविधा लिनका लागि एक सातामात्रै बाँकी रहेकाले समयमै भुक्तानी गरी सहुलियत लिन बैंकले आग्रह गरेको । सहज तथा सबल बैंकिङ्गको मूल...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 06th July 2020
काठमाडौं । सोमबार सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेको छ । सुन तोलाको ९० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । ९१ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको सुनको मूल्य घटेर केही दिनयता घट्दै ९० हजार २ सय रुपैयाँमा झरेको हो। सोमबार चाँदीको मूल्यमा भने...
सुनको मुल्यमा सामान्य गिरावट,कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं&ndash; आज सुनको भाउ तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेको छ । चाँदीको भाउ स्थिर छ । आज सुन तोलामा ९० हजार २ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो सुनको भाउ तोलामा ९० हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । चाँदी भने हिजोजस्तै तोलाको ९ सय ४० रुपैयाँमा...
१२५ सीसीको डबल सिट भएको पल्सर बाईक आयोः यस्तो छ मूल्य र बनावट
बजाज अटोले सबैभन्दा सस्तो पल्सर १२५ नयाँ स्प्लिट सिट भेरिएन्ट लन्च गरेको छ । सो बाइकको मूल्य ७९ हजार ०९१ भारु तोकिएको छ । सो बाइकको फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक स्ट्यान्डर्ड समावेश गरेको छ । सिंगल सिट भएको पल्सर १२५ को मूल्य डिस्क ब्रेक भेरिएन्टको भन्दा ३ हजार ५९७ र ड्रम...
नयाँ रेकर्ड बनाउँदै जेफ बेजोस बने विश्वकै धनी व्यक्ति
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 04th July 2020
एजेन्सी - अनलाइन स्टोर अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस यसअघिका सबै रेकर्ड तोड्दै हालसम्मकै धनी व्यक्तिको रुपमा स्थापित भएका छन् । कोरोनाभाइरसका कारण अन्य क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि बेजोसको सम्पत्तिमा भने कुनै असर परको छैन । उल्टै उनको सम्पत्ति हरेक साता थपिने क्रममा छ । कोरोनाभाइरसका कारण...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 03rd July 2020
हेटौंडा - बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयक प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बजेटमाथि प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछिशुक्रबार बजेट पारित गरिएको हो । बजेटमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाहेक अन्य दलका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक...
काठमाडौं - बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । कसूर मुद्दामा फरार रहेका भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका ७ का राम ज्यापु र काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका ११ पैँयूटारका प्रकाश बुढाथोकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । उच्च अदालत पाटनको ०७६ भदौ २ गतेको फैसलाले ज्यापूलाई ११ लाख ५० हजार...
काठमाडौं &ndash; लगातार दोस्रो दिन पनि सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ५०० रूपैयाँले घटेको छ । बिहिबार प्रतितोला ९१ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सुन शुक्रबार ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला ९० हजार ६५ रुपैयाँमा...
निम्न मध्यम आय भएको देशको सूचीमा उक्लियो नेपाल
काठमाडौं - नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा नेपाल निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा छ ।विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय गत वर्षको तुलनामा १३० डलरले वृद्धि भएको छ । सन् २०१९ मा...
काठमाडौं महानगरको बजेट १६ अर्ब ४३ करोड पारित
काठमाडौं&ndash; काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्ताव गरेको रु १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजारको बजेट पारित भएको छ । बिहिबार बसेको कामपाको ७ औँ नगरसभाको तेश्रो बैठकबाट सो बजेट पारित भएको हो । यही असार १० गते बसेको नगरसभाको दोश्रो बैठकमा कामपाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले...
नेप्से ६ प्रतिशत घटेपछि कारोबार बन्द
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 02nd July 2020
काठमाडौं &ndash; नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशत घटेपछि आजको कारोबार बन्द भएको छ । मंगलबार र बुधबार दुई दिन सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको नेप्से बिहिबार भने नकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको हो। बिहिबार बजार खुलेको २३ मिनेटमा पहिलो सर्किट लागेर २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित भएको थियो भने ११ः४७ मा दोस्रो सर्किट...
बन्दाबन्दीले चिया क्षेत्रमा लाखौँको घाटाः न श्रमिकलाई तलब, न त चियाकै बिक्री
इलाम&ndash; मुख्य सिजनमै बन्दाबन्दी भएपछि चिया क्षेत्रले लाखौँको घाटा व्यहोर्नु परेको छ । चियाकै राजा &lsquo;पहिलो टिपाइ&rsquo; बेच्ने समयमा कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी भएपछि एकातिर किसानले चिया टिपेर प्रशोधित क्षेत्रसम्म पुर्&zwj;याउन सकेनन् भने अर्कातिर उद्योगमा प्रशोधन गरिएको चिया पनि बजारमा पुर्&zwj;याउन नसक्दा समस्या भएको छ । विशेषगरी चैतको दोस्रो साताबाट चियाको &lsquo;पहिलो...
फ्रान्सका पूर्वप्रधानमन्त्री फिलोन भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर,५ वर्षको जेल सजाय
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th June 2020
काठमाडौं &ndash; फ्रान्सका पूर्वप्रधानमन्त्री फ्राँस्वाँ फिलोनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । फिलोनकी पत्नी पेनेलोपलेसमेत सार्वजनिक कोषको १० लाख यूरोभन्दा बढी रकम दुरूपयोग गरेको अभियोगमा पेरिस अदालतले ३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । यसअतिरिक्त उनीहरू दुवै जनालाई ३ लाख ७५ हजार यूरो जरिवानाको फैसला...
भारतमा टिकटक,पब्जीसहितका ५९ चिनियाँ एप्समा प्रतिबन्ध
काठमाडौं &ndash; लद्दाख भिडन्तमा २० भारतीय सैनिक मारिएपछि चीनसँग रूष्ट बनेको भारतले टिकटक, पब्जीसहितका ५९ वटा चिनियाँ एप्सलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धित एप्सहरूमा चिनियाँ सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित वी मिट, वेब च्याट लगायत पनि छन् । चिनियाँ एप्सले देशको सम्प्रभुता र अखण्डतामा खतरा पुर्&zwj;याएको भन्दै प्रयोगमा रोक लगाइएको भारतको आइटी मन्त्रालयले जनाएको...
नेपाललाई एमसीसी अनुदान सधैं उपलब्ध हुन्न : अमेरिका
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th June 2020
काठमाडौं - अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को अनुदान रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने बताएको छ । सम्झौता नेपालको संसदबाट सम्झौता एमसीसी अहिलेसम्म अनुमोदन नभएकोबारे अमेरिका जानकार रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय भएको बताएको छ । दूताबासले भनेको छ, &lsquo;यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको...
जब कृषिमन्त्री धान रोप्ने उद्घाटन गर्न बुट लगाएर खेतमा छिरे त्यसैबेला मेसिनले धानै रोपेन!
उदयपुर - कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल सोमबार धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको कार्यक्रमका लागि उदयपुर पुगे । त्रियुगा नगरपालिका १३ बडेवहामा स्थानीय साहरा सहकारी संस्थाले चक्लाबन्दी खेती गरेको ठाउँमा सोमबार मेसिनले धान रोप्ने कार्यक्रम थियो । त्यसका लागि त्रियुगा नगरपालिकाले धान रोप्ने मेसिनको बन्दोबस्त पनि गरेको थियो । धान दिवसको...
आज राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै,सामूहिक धान रोप्न कृषि मन्त्री भुसाल पुगे उदयपुर
काठमाडौं - आज असार १५, दही चिउरा खाँदै नाच्दै गाउँदै रोपाइँ गरेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ । कोरोना भाइरसको महामारी र सलह किराको त्रासका बीच कृषक यो दिवसलाई मनाइरहेका छन् । कषि मन्त्रायल र अन्य सरोकारवाला निकायले पनि यस दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम राखेको छ । राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन कृषि मन्त्री...
धनगढी उपमहानगरले गर्यो लकडाउन अवधिको पचास प्रतिशत भाडा मिनाहा
धनगढी&ndash; धनगढी उपमहानगरपालिकाले पूर्ण लकडाउनका तीन महिनाको भाडामा ५० प्रतिशत मिनाहा गरेको छ । आज उपमहानगरपालिकाले आफ्ना सपिङ कम्प्लेक्सको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले गत चैत ११ देखि यही असार १ गतेसम्मको भाडा छुट गरेको नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले बताए । कैलाली...
जापानी कम्पनीले बनायो फोन गर्न मिल्ने अत्याधुनिक मास्क
काठमाडौं &ndash; विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेका बेला जापानी कम्पनीले अत्याधुनिक मास्क निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले ब्लुटुथ जडान गरिएको मास्कको निर्माण गरेको जनाएको हो । डोनट रोबोटिक्सले तयार गरेको उक्त अत्याधुनिक मास्कको नाम सी मास्क राखिएको छ । सेतो प्लास्टिकबाट निर्माण गरिएको उक्त मास्क मोबाइलमा एप डाउनलोड गरेर...
पाकिस्तानमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि, एकैपटक २६ रुपैयाले बढ्यो
एजेन्सी&ndash; पाकिस्तानको सरकारले सवै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्यमा पुरानो मूल्यको भन्दा झण्डै २६ रुपैया बृद्धि भएको पाइएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय पाकिस्तानी रुपैया र दश पैसा पुगेको छ । यसअघि त्यसको मूल्य ७४.५२ पाकिस्तानी रुपैया रहेको थियो । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको...
श्रीलंकामा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले निकाल्यो सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष
काठमाडौं &ndash; अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रति श्रीलंकामा असहमति देखिएको छ । नेपालमा समेत एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला श्रीलंकामा एमसीसी अध्ययन गर्न बनेको समितिले सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अध्ययन समितिले श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेलाई बिहीवार साँझ प्रतिवेदन पेश गरेको थियो...
कोरोना नियन्त्रण गर्न फेरि ५५ करोड बढी निकासा
काठमाडौं&ndash; सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह र सेनालाई गरी ५५ करोडभन्दा बढी निकासा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषले गत बुधबार सो रकम निकासा दिएको हो । कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 26th June 2020
कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद एवं सरोकार भएका पक्षले जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको बेला उनीहरुले सङ्घीय अर्थव्यवस्थालाई बल पु&yen;याउने र बन्दाबन्दीले पारेको असरलाई कम गर्ने खालका व्यवस्था जरुरी रहेकामा ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल आर्थिक...
काठमाडौं - शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सयले घटेर ९० हजार ६ मा कायम भएको छ। बिहीबार सुन ९१ हजार १ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी, तेजाबी सुनको मूल्य ९० हजार एक सय ६० रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले...
कोरोना भाईरसः सुरक्षित हवाईयात्रा कसरी गर्ने ?
&lsquo;कृपया अब हामी बुद्ध एयरको उडान नं. ६०१ बाट पोखरा प्रस्थान गर्दैछौँ । बाह्र हजार फिटको उचाइबाट २५ मिनेटको यात्रापछि पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुनेछौँ । यात्रु महानुभावहरु ध्यानदिनुहोला १ &ldquo;कोभिड&ndash;१९ को महामारीबाट सुरक्षित रहनका लागि हवाई यात्रामा पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा निर्देशन&rdquo; कृपया आफ्नो सिटबेल्ट बाँधिदिनु होला, यात्रा अवधिभर मास्क र फेससिट...
काठमाडौं&ndash; टोखा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु एक अर्ब ५८ करोड ४१ लख ७७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखा नगरपालिकाले बुधबारको सातौँ नगरसभामा आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेको हो । नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब...
सुनको भाउ फेरी बढ्यो,आज कति पुग्यो?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 24th June 2020
काठमाडौं - बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । बजारमा छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ९१ हजार १ सय र तेजावी ९० हजार ६ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदीको मूल्य मंगलबारको तुलनामा प्रतितोला पाँच रुपैयाँले बृद्धि भएर ९४५ रुपैयाँ पुगको छ...
कोरोनाका कारण देश आर्थिक संकटमा पर्दै : कर्णालीका जनप्रतिनिधिलाई भने दोब्बर सुविधा, विदेश भ्रमण भत्ता देखी चाडपर्व खर्चसम्म
सुर्खेत - कोरोनाको कहरमा पनि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि दोब्बर सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधा सम्बन्धी...
अस्ट्रेलियामा ठगी आरोपमा पक्राउ परेका २ नेपाली जेल चलान
काठमाडौं -&nbsp; अस्ट्रेलियामा ठगी आरोपमा पक्राउ परेका दुई जना नेपालीलाई जेल पठाइएको छ । पश्चिमी सिड्नीकी एक वृद्ध महिलासँग हजारौं डलर ठगी गरेको आरोपमा उनीहरुलाई सिड्नीस्थित एक अदालतले जेल चलान गरेको हो । प्रहरीले २२ वर्षकी नेहा गिरी र १९ वर्षका आयुष भट्टराईलाई स्थानीय समयअनुसार सोमबार अपरान्ह साढे ४ बजे टेलोपियामा एक...
एमसिसी सकस : अनुमोदन गर्ने अन्तिम मिति असार १६, संसद बैठक बोलाइयो असार १७
काठमाडौं &ndash; एमसिसी परियोजनालाई असार १६ (जुन ३०) सम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भए पनि संसद बैठक अब एकैपटक असार १७ गते का लागि बोलाइएको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसिसी स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयम विवाद चलिरहँदा अनुमोदनका लागि दिइएको अन्तिम मिति घर्किने भएको हो। एमसिसीका अनुमोदनका लागि दिइएको समय घर्किने गरी संसद...
८५ वर्षीया वृद्धालाई ठगी गरेको आरोपमा अष्ट्रेलियामा २ नेपाली पक्राउ
काठमाडौं -&nbsp; अष्ट्रेलियामा ८५ वर्षीया एक वृद्धालाई ठगी गरेको आरोपमा दुई नेपाली पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई पश्चिमी सिड्नीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले २२ वर्षीया नेहा गिरी र १९ वर्षीय आयुष भट्टराईलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । उनीहरुमाथि छलकपटपूर्वक पैसा असुल गरेको अभियोगमा पाँचौं दर्जा र जानाजान आपराधिक कार्यमा...
आज कतिमा कारोबार हुँदैछ सुनको भाउ ?
काठमाडौं - नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज सामान्य घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ९१ हजारमा कारोबार भएको सुन आज भने ४ सय रुपैयाँले घट्दै ९० हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि १० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९४० मा कारोबार भइरहेको छ...
प्रसारण लाइन समस्याले ३ जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जादैँ
काठमाडौं । अहिले सञ्चालनमा रहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन ओभरलोड हुँदा ३ जिल्लामा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जान थालेको छ । दुहबी-धरान-धनकुटा हुँदै भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुमसम्मको प्रसारण लाइन ओभरलोड हुँदा निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था आएको हो । प्रसारण लाइन समस्याले ३ जिल्लामा सञ्चालित...
कृषि विकास बैंकले १० देखि ६० प्रतिशतसम्म ब्याजमा छुट दिने
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th June 2020
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले साना तथा लघु ऋणीलाई विशेष प्याकेज ल्याएको छ । कोभिड&ndash;१९ को महामारीमा आफूले गर्दै आएको उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर बसेका ऋणीका लागि राहत दिन बैंकले निर्देशिका नै जारी गरेर विशेष स्कीम ल्याएको हो । सो व्यवस्थामार्फत कृषि विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई १० देखि ६० प्रतिशतसम्म...